ပြန်လည်သုံးသပ်။ penile စိုက်ထူခြင်း၏ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု - oxytocin ၏အခန်းကဏ္ and နှင့် dopamine နှင့် glutamic acid နှင့်အထီးကြွက်များတွင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ penile စိုက်ထူဗဟိုထိန်းချုပ်မှု: အ oxytocin ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်အထီးကြွက်များတွင် dopamine နဲ့အချိုမှုအက်ဆစ်နှင့်အတူ၎င်း၏အပြန်အလှန် (2011) ၏တစ်ဦးကပြန်လည်စစ်ကြော
neuroscience Biobehav ဗျာ 2011 ဇန်နဝါရီ; 35 (3): 939-55 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2010.10.014 ။ EPub 2010 နိုဝင်ဘာ2။
Melis MR1, Argiolas တစ်ဦးက.
1အာရုံကြောသိပ္ပံ, Cagliari ၏တက္ကသိုလ်ဘားခ Brody ဦးစီးဌာန, Cittadella Universitaria, 09042 Monserrato,, CA, အီတလီ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်သို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ oxytocin penile စိုက်ထူတဲ့အစွမ်းထက်သွေးဆောင်သည်။ အထီးကြွက်များတွင် oxytocin ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အများဆုံးထိခိုက်မခံတဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယသည်။ ဤသည်နျူကလိယနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများအပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများနှင့်ကျောရိုးမှထုတ်လုပ်တဲ့အားလုံး oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်ဆံ့။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဤဒေသများ (ဥပမာ ventral tegmental ဧရိယာသည် hippocampus ၏ ventral subiculum, အ amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယနှင့် thoraco-lumbar ကျောရိုး) ၏အချို့အတွက်ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ oxytocin လည်း penile စိုက်ထူ induces ကြောင်းပြသထားတယ်။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်နှောက် microdialysis နှင့်နှစ်ဆနဲ့ Immunofluorescence လေ့လာမှုများနှင့်အတူပေါင်းစပ် Microinjection လေ့လာမှုများ (အဓိကအားဖြင့်အချိုမှုအက်ဆစ်မှတဆင့်) ဤဒေသများရှိ oxytocin ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်မြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်း mesolimbic dopaminergic အာရုံခံအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အလှည့်အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ဖြန့်ချိ Dopamine ဟာ paraventricular နျူကလိယအတွက် incerto-hypothalamic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation မှဦးဆောင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဤသည် oxytocinergic အာရုံခံဟာကျောရိုးမှထုတ်လုပ်တဲ့နှင့် penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေပေမယ့်လည်း (အချိုမှုအက်ဆစ်တဆင့်) ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်ကိုထိန်းချုပ် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲပစ်အထက်ပါအပို-hypothalamic ဒေသများသို့ထုတ်လုပ်တဲ့သူများ, မသာမြှင့်လုပ်ဆောင်။ အတူတူကဤအာရုံကြောလမ်းကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့် (erectile function ကိုများနှင့်သုတ်ရည်ထိ) တွင်, ဒါပေမယ့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ anticipatory အဆင့်များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်ကြိုးရှုထောင့်ထဲမှာမသာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုရှုပ်ထွေးပြီးမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ circuit ကို, ဖွဲ့စည်းစေနိုင်သည်။
penile စိုက်ထူလူကိုအပါအဝင်နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏မျိုးပွားအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်နှင့်လည်းမျိုးပွားရန်တင်းကြပ်စွာဆက်စပ်ရှိသူများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခင်းအကျင်းများတွင်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်ထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်အပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအလယ်ပိုင်းနှင့်အရံအာရုံကြောနှင့် / သို့မဟုတ်ဟာသယန္တယားက၎င်း၏စည်းမျဉ်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက် (Meisel နှင့် Sachs, 1994 တွေ့မြင်; Argiolas နှင့် Melis, 1995, 2004, 2005; Sachs, 2000, 2007; McKenna, 2000; Giuliano နှင့် Rampin, 2000, 2004; Andersson, 2001; Melis နှင့် Argiolas, 1995a, 2003; Hull et al, 2002) ။ ။ penile စိုက်ထူထိန်းချုပ်အလယ်ပိုင်း neurotransmitters နှင့် neuropeptides များထဲတွင်အကောင်းဆုံးလူသိများများမှာ dopamine, serotonin, excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်, adrenocorticotropin, oxytocin နှင့် opioid peptides။ သူတို့ကအများအပြားဟာဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူလွယ်ကူချောမွေ့သို့မဟုတ်တားစီးနိုင်, ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာသည် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယက, ventral tegmental ဧရိယာသည် hippocampus, အ amygdala, အ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယက, နျူကလိယ accumbens, အ medulla oblongata နှင့်ကျောရိုး (ဇယား 1) (, 1994 Meisel နှင့် Sachs တွေ့မြင်; Witt နှင့် Insel, 1994; Stancampiano et al, 1994; ။ Argiolas နှင့် Melis, 1995, 2005; Argiolas, 1999; Bancila et al, 2002; ။ Giuliano နှင့် Rampin, 2000, McKenna, 2000; Andersson, 2001; Hull et al, 2002; ။ Coolen et al, 2004) ။ ။
oxytocin, ကောင်းစွာနို့နှင့် parturition အတွက်၎င်း၏ဟော်မုန်းအခန်းကဏ္ဍများအတွက်သိ neurohypophyseal peptide, အ paraventricular တည်ရှိသောဆဲလ်အသေကောင်နှင့်အတူအာရုံခံနှင့် neurohypophysis မှထုတ်လုပ်တဲ့ယင်း hypothalamus ၏ supraoptic အရေးပါအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းထုတ်လုပ်တဲ့အာရုံခံထဲမှာမသာ, အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အဆောက်အဦထဲကနေ extrahypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများ (ဆိုလိုသည်မှာယင်း septum, အ ventral tegmental ဧရိယာသည် hippocampus, အ amygdala, အ medulla oblongata နှင့်ကျောရိုး) ကို။ 1978, Sofroniew;; ဤရွေ့ကားအာရုံခံ penile စိုက်ထူခြင်းနှင့် copulatory အပြုအမူ (Buijs ကြည့်မြင် 1983 အပါအဝင် Affiliate နှင့်လူမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, သင်ယူခြင်းထိုကဲ့သို့သောမှတ်ဉာဏ်အဖြစ်မြောက်မြားစွာဗဟိုလုပ်ငန်းဆောင်တာ, တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ထင်နေကြတယ် Argiolas နှင့် Gessa, 1991; Pedersen et al ။ , 1992; Carter က, 1992; Wagner နှင့် Clemens, 1993; Ivell နှင့် Russell, 1995; Carter က et al, 1997; ။ တန် et al, 1998; ။ Veronneau-Longueville et al, 1999) ။ ။ အမှန်စင်စစ် oxytocin (; Carter က, 1991; Pedersen et al, 1992; ။ Argiolas နှင့် Melis, 1992, 1995; Argiolas, 2004 Argiolas နှင့် Gessa, 1999 ကိုကြည့်ပါ) ကြွက်, ကြွက်, ယုန်နှင့်မျောက်တွေကို erectile function ကိုနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ (။ , မာဖီ et al, 1987 ။ Carmichael et al, 1987) နှင့်များသောအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ရသောရင်သားနှင့်မအင်္ဂါ၏ခြယ်လှယ်ကဒီအပလာစမာ oxytocin အထူးသဖြင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်တိုးပွါးကတည်းကလူသားများအတွက်ကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ လိင်ဆက်ဆံမှု (Tindall, 1974) ။
အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် oxytocin ၏တစ်ဦးကသင်တန်းနည်းပြအကျိုးသက်ရောက်မှုပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးသုတ်ရည်လွှတ်ဖို့အောင်းနေချိန်လျော့ရန်နှင့်လက်ခံအမျိုးသမီး (Melin နှင့် Kihlstrom, 1963) နဲ့တွဲအထီးယုန်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှောင့်နှေးစေရန်သွေးကြောသွင်း oxytocin များ၏စွမ်းရည်အားဖြင့်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် oxytocin များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်သာရှစ်ဆယ်အတွက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ nanogram ပမာဏသာရှိဗဟိုပေးထား oxytocin ထို့နောက် (။ Argiolas et al 1985, 1986) penile စိုက်ထူသွေးဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့် copulatory အပြုအမူတိုးတက်စေရန် (အယ်လ် Arletti et ။ , 1985) အထီးကြွက်များတွင်နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင် lordosis တိုးမြှင့်ဖို့ခံခဲ့ရသည် (Arletti နှင့် Bertolini, 1985; ။ ) မြို့သားများနှင့်ကိုးကား; Argiolas, 1986;; Melis နှင့် Argiolas, 1995 ဝဲလ် et al, 2004), ပုံသားအိမ်-type အမျိုးအစား oxytocinergic receptors အပေါ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့် (Argiolas နှင့် Melis, 1999, 2003 ကြည့်ပါ။ oxytocin (Arletti et al ။ , 1985) လိင်ကအစွမ်းထက်အထီးကြွက်မသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်လည်းအသက်အထီးကြွက် (Arletti et al ။ , 1990) ၌၎င်း, လွှမ်းမိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲလက်အောက်ခံ, အထီးရှဉ့မျောက် (Winslow နှင့် Insel အတွက် , 1991) ။
က estradiol နှင့် 5_-dihydro-testosterone ဟော်မုန်းအတူတူပေးထား, hypophysectomy နှင့်သင်းအားဖြင့်ဖျက်သိမ်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်ယင်း၏ metabolites နှင့်အတူဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်ပွနျထားကတည်းက oxytocin ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှု, testosterone ဟော်မုန်း-မှီခိုဖြစ်ပါသည် (Melis et al ။ , 1994a) ။ oxytocin အားဖြင့် penile စိုက်ထူ၏ induction များအတွက်အများဆုံးထိခိုက်မခံတဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယဖြစ်ပါသည် (Melis et al ။ , 1986), အားလုံးအပို-hypothalamic oxytocinergic စီမံချက်များအစပြုရာမှ (အထကျကိုကြည့်ပါ) ။ ဒီနေရာမှာ oxytocin (အောက်တွင်ပုဒ်မ3ကိုကြည့်ပါ) 2.1 pmol သကဲ့သို့အနိမ့်ဆေးများမှာထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ penile စိုက်ထူ (နှင့်ဟ) သွေးဆောင်နိုင်ရာမှတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုဒ်မ 1 ကိုကြည့်ပါ) ဒါပေမယ့်မ dorsal subiculum ထဲမှာ, hippocampus ၏ CA2.3 လယ်သို့နှစ်နိုင်ငံနှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum, အ caudate နျူကလိယက, medial preoptic ဧရိယာသည် hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယနှင့်ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ oxytocin လည်း penile စိုက်ထူသွေးဆောင် supraoptic နျူကလိယ (Melis et al ။ , 1986) ။ oxytocin ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်ဖို့ paraventricular နျူကလိယထဲမှာပြုမူသောယန္တရားအဖြစ်, မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများ oxytocin ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီယူဆချက်နှင့်အညီ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်တိုး FOS, penile စိုက်ထူ၏ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သောကျောရိုးမှထုတ်လုပ်တဲ့ paraventricular oxytocinergic အာရုံခံအတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇက c-fos ၏မျိုးဗီဇထုတ်ကုန် (Witt နှင့် Insel, 1994 နှင့်ကိုးကားကြည့်ရှု မြို့သားတစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏), နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားမရှိခြင်း (ဥပမာ, အနိုငျစှမျးမရှိသောတစ်ခု ovariectomized အီစထိုဂျင်-progesteroneprimed လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူ copulate မှအထီးကြွက်) ကို hypothalamus (Arletti et ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် oxytocin mRNA ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအထီးကြွက်များတွင်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည် အယ်လ်။ , 1997) ။
oxytocin အဆိုပါ anticipatory အဆင့်သြဇာလွှမ်းမိုးသို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပင်ဖြစ်သည်ရှိမရှိ။ oxytocin penile စိုက်ထူ induces နှင့် copulatory အပြုအမူအပေါ် oxytocin ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်အထီးကြွက်များတွင် Post-ejaculatory ကြားကာလတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့ (Arletti et al ။ , 1985), က peptide လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သည်ဟုယူဆရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ သို့သော် oxytocin လည်းလူမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်တိုးပွါး (1992, Pedersen et al တွေ့မြင်; 1997, Carter က et al ။ , ။ Ivell နှင့် Russell, 1995) ကဲ့သို့၎င်း, oxytocin အဲဒီ receptor ရန် (။ Melis et al, 1999a) noncontact စိုက်ထူတားဆီးရာ (။ Sachs, 1997, 2000, 2007 တွေ့မြင်; မြို့သား Melis et al, 1998, 1999b နှင့်ကိုးကား) လိင်စိတ်နိုးထတစ်ဦးအညွှန်းကိန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ်, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်လှုံ့ဆျောမှုအတွက် oxytocin တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှထွက်အုပ်ချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ၏ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်အတည်မပြုရသေးသောရလဒ်များကိုအကျဉ်းချုပ်, ကြောင်းပြသရာ oxytocin အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းသောအခါ, ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သော ventral tegmental ဧရိယာကဲ့သို့သောအခြားအပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာထဲမှာမသာ penile စိုက်ထူ induces (Melis et al, 2007, 2009a; ။ ။ Succu et al, 2008), t ကိုသူ ventral အဆိုပါ hippocampus ၏ subiculum နှင့် amygdala ၏ posterior နျူကလိယ (Melis et al ။ , 2009b, 2010), အ limbic စနစ်၏အရေးကြီးသောမဲဆန္ဒနယ်မှဖြစ်ကြပြီးလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆုလာဘ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှထင်ထားတဲ့။ ဒီလေ့လာမှုတွေ oxytocin သေးဖြစ်တို့အားဤသို့သော dopamine နဲ့အချိုမှုအက်ဆစ်ကဲ့သို့သောအခြား neurotransmitters, နှင့် paraventricular နျူကလိယထက်အခြားကိုအခြားဦးနှောက်ဧရိယာများ, ဥပမာ, အ ventral tegmental ဧရိယာသည်နျူကလိယ accumbens, အ hippocampus နှင့်ဒေသများပါဝင်သည်ထားတဲ့အာရုံကြောဆားကစ်အတွက်ပါဝင်ကြောင်းထုတ်ဖေါ် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဆားကစ်ပု mesolimbic နှင့် incerto-hypothalamic dopaminergic သည့်စနစ်အကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်, နှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့် (ဥပမာ penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိ) တွင်, ဒါပေမယ့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထဲမှာမသာအခန်းကဏ္ဍဖွယ်ရှိနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ ဤအရပ်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်ကြိုးဂုဏ်သတ္တိများရှင်းပြများအတွက်အာရုံကြောအလွှာပေး arousal ။
2 ။ oxytocin ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူသြဇာလွှမ်းမိုး
2.1 ။ အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ
အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအထက်တွင်ပြန်ပြောပြအဖြစ်မကြာမီ oxytocin ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အများဆုံးထိခိုက်မခံတဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဒီနျူကလိယအတွက်တဖက်သတ်ထိုးသွင်းတဲ့အခါ, oxytocin3ng (3 pmol) (Melis et al ။ , 1986) အဖြစ်အဖြစ်အနိမ့်ဆေးများမှာတက်ကြွစွာရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ-လှုပ်ရှားမှုကြားဆက်ဆံရေးလေ့လာမှုများ oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူအပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများနှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ၏ activation မှထုတ်လုပ်တဲ့ oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်သို့ Ca2 + ဝင်လာဖို့ coupled uterinetype oxytocin receptors, ကကမကထပြုခဲ့ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ။ (guanylate cyclase ပါဝင်သောမဟုတ်) တစ်ဦးသေးမသိသောယန္တရားနဲ့ intracellular တမန် penile စိုက်ထူ (ပုံ။ 1) inducing သည်ကျောရိုးနှင့်အပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဒေသများသို့ထုတ်လုပ်တဲ့ oxytocinergic အာရုံခံ၏ activation မှဦးဆောင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်အလှည့်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် (ကြည့်ရှု အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှင့်တကွ Argiolas နှင့် Melis, 1995, 2004, 2005 နှင့်ကိုးကား) ။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အာရုံခံမျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်စေဖို့ oxytocin များ၏စွမ်းရည်ကို
သင်္ဘောသဖန်း။ 1 ။ ထိုကဲ့သို့သောစတာတွေဟာကျောရိုးသည် VTA, အ hippocampus, အ amygdala ကြောင့်အပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာအားဖြင့်ဤအအာရုံခံ၏ activation ဖို့ hypothalamus နှင့်စီမံကိန်းများ၏ paraventricular နျူကလိယထဲမှာအစပြုပေးသော oxytocinergic အာရုံခံ၏ (ပျောက်ဆုံး) သိထားကိုယ်စားပြုမှု, dopamine, excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်, သူ့ဟာသူ oxytocin, hexarelin analogue peptides နှင့် VGF-ဆင်းသက်လာ peptides လျှော့ချနှင့် / သို့မဟုတ် GABAergic, opioid နှင့် cannabinoid CB1 receptors ၏ဆွခြင်းဖြင့်ဖျက်သိမ်းနိုင်သည့် penile စိုက်ထူ, စေပါတယ်။ oxytocinergic အာရုံခံ၏ activation သည်ဤအာရုံခံအတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ပစ္စုပ္ပန်၏ activation မှအလယ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ် endogenous သော paraventricular နျူကလိယသို့တိုက်ရိုက်ပေးထားနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အလှူရှင်များမှဆင်းသက်လာသည်အတိုင်း, dopamine, excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်သို့မဟုတ် oxytocin receptors သို့မဟုတ် exogenous နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏ဆွကဖွဲ့စည်းနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်, တစ်ဦးသေးအမည်မသိယန္တရားအားဖြင့် oxytocinergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်, ပုံနှင့်ဆက်စပ်သောမဟုတ် guanylate cyclase ၏ဆွ။ ဒါကကျောရိုးနှင့်အပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် oxytocin များလွှတ်ပေးရန်ကိုဖွင့်ထဲမှာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤဒေသများအတွင်းဖြန့်ချိသည့်အခါ penile စိုက်ထူ induces ရာ oxytocin အားဖြင့်ယန္တယားအပေါ်အသေးစိတ်အချို့သည်ဥပမာ, အ VTA, အ ventral subiculum နှင့် amygdala သက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်ဧရိယာအပိုင်းများတွင်ဖော်ပြထားကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ oxytocin အဆိုပါ PVN တှငျတှေ့အဖြစ် penile စိုက်ထူဖို့ဦးဆောင်အရာ, ကိုယ်ပိုင် receptors အပေါ်ပြုမူခြင်းနှင့် NO ထုတ်လုပ်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ သို့သော် PVN နှင့်အတူကှဲလှဲမှာ, caudal VTA NO အတွက် guanylate cyclase မြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဤသည် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation ရန်နှင့် penile စိုက်ထူရန်ဦးဆောင် cGMP အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးလာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဆိုပါ VS NO အတွက် VTA အပါအဝင်အပို-hippocampal ဒေသများမှထုတ်လုပ်တဲ့ glutamatergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်။ oxytocin နှင့်အတူတွေ့ရှိရအဖြစ် VTA အတွက်အချိုမှုအက်ဆစ်အလှည့် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံအတွက်မြှင့်လုပ်ဆောင်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သူတို့အားအလားတူ mechanisms penile စိုက်ထူအမည်ရအထီးကြွက်တစ်ဦးတပိုင်တနိုင်လက်ခံအမျိုးသမီး (ဥပမာ noncontact စိုက်ထူ) ၏ရှေ့တော်မှောက်တွင်သို့မဟုတ်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းနေရာချသောအခါအဖြစ်, ဇီဝကမ္မအခင်းအကျင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတွင်လည်းလည်ပတ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယထဲတွင်ဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများကထောက်ခံခဲ့သည်: (1) oxytocin receptors ဒီ hypothalamic နျူကလိယရှိ (Freund-Mercier et al, 1987; ။ Freund-Mercier နှင့် Stoeckel, 1995); (2) oxytocin စသည်တို့နှင့် Vivo အတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လွှတ်ပေးရန်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် (Freund-Mercier နဲ့ Richard, 1981, 1984; ။ Moose et al, 1984); နှင့် (3) oxytocin အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယပွုခွငျးအားဖွငျ့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အာရုံခံ excites (Yamashita et al ။ , 1987) ။ ထိုမှတပါး, magnocellular oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အပေါ် impinging oxytocinergic synapses ကိုလည်း hypothalamus ၏ paraventricular နှင့် supraoptic နျူကလိယမှာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ (Theodosis, 1985) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လုံးဝ oxytocin ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အနှံ့အကြောင်းအရာနှင့်ကျောရိုး depletes သော paraventricular နျူကလိယ၏လျှပ်သို့မဟုတ်ဓာတု excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်ဗဟို oxytocinergic အာရုံခံ၏ဖျက်ဆီးခြင်းငှါ oxytocin ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုမသာ abolishes, ဒါပေမယ့်လည်းမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ချို့ယွင်း penile စိုက်ထူခြင်းနှင့် noncontact စိုက်ထူ (အောက်တွင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် Argiolas et al, 1987a, ခ; ။ လျူ et al, မြို့သား 1997 နှင့်ကိုးကား။ ) ။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူတွေ့ရှိရသူတို့အားအလားတူရလဒ်များအစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် oxytocin အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူတွေ့ရသည်။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricles သို့ငါအပ်တဲ့အခါမှာ penile သူ့ဟာသူ oxytocin အားဖြင့်သွေးဆောင်စိုက်ထူ, ဒါပေမယ့်လည်းမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူမသာတားဆီးနေစဉ်အမှန်စင်စစ် nanogram ပမာဏအတွက် paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းသောဤဒြပ်ပေါင်းများ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုဒ်မ3ကြည့်မြင်လုံးဝ oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူတားဆီး နှင့် Argiolas နှင့် Melis, 1995, 2004, 2005 နှင့်ကိုးကားမြို့သား) နှင့် noncontact စိုက်ထူ (Melis et al ။ , 1999a) နှင့်ထိုမှတပါးလိင်အစွမ်းထက်အထီးကြွက် (Argiolas et al ။ , 1988) ၏ copulatory အပြုအမူ impairing အတွက်အလွန်ထိရောက်သောခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်တိုး FOS, penile စိုက်ထူ၏ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်သည့်ကျောရိုးမှထုတ်လုပ်တဲ့ paraventricular oxytocinergic အာရုံခံအတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇက c-fos ၏မျိုးဗီဇထုတ်ကုန် (မြို့သား Witt နှင့် Insel, 1994 နှင့်ကိုးကားကြည့်ပါ) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားမရှိခြင်း (တစ်ဦးအီစထိုဂျင်-progesteroneprimed လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူ copulate တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်၏ဥပမာသည်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း) ဇအဖြစ်ကိုလည်း oxytocin mRNA ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအထီးကြွက်နှင့် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယထဲမှာနိုက်ထရစ်-အောက်ဆိုဒ် synthase ၏ဆက်နွယ်ခဲ့ (Benelli et al, 1995; ။ ။ Arletti et al, 1997) (ဤလေ့လာမှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ပြန်သုံးသပ် Argiolas, 1999 တွေ့မြင်; Argiolas နှင့် Melis, 2004, 2005) ။
2.2 ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ oxytocin penile စိုက်ထူ induces ထားတဲ့အတွက်ဦးနှောက်ရဲ့ site အဖြစ်သာမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသည်ဧရိယာ (။ , Freund-Mercier et al 1987; Vaccari et al, 1998 ပါ။ ) paraventricular နျူကလိယနှင့် oxytocin receptors ထဲမှ oxytocinergic အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်ပါရှိသည်။ ပိုများသောအတိအကျ, oxytocin ဈနိုင်စွမ်းရှာတွေ့ခဲ့သည်အဆိုပါ caudal သို့ပေမယ့်မ rostral ventral tegmental ဧရိယာ၌တဖက်သတ်ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ penile စိုက်ထူ nducing တစ်ဦးထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌ (Melis et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းခြင်းနှင့်သူတို့အား inducing penile စိုက်ထူဆင်တူသည့်အခါ hippocampus ၏ ventral subiculum သို့ဒါမှမဟုတ် amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) သို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာတက်ကြွစွာဆေးများလိုအပ်များထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ ပုံလိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုအလှည့်အတွက်သေး penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေ paraventricular oxytocinergic အာရုံခံအပေါ် impinging အဆိုပါ incerto-hypothalamic dopaminergic အာရုံခံမှထုတ်လုပ်တဲ့မသိသောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်သောနျူကလိယ၏ shell ကို accumbens မှထုတ်လုပ်တဲ့ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation, ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (Melis et al ။ , 2007, 2009a) ။
oxytocin အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopaminergic neurotransmission မြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသောအားဖြင့်ယန္တရားမှသကဲ့သို့, ရရှိနိုင်သည့်ဒေတာကြောင့်အကြံပြု oxytocin mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်တွင်တည်ရှိ oxytocinergic receptors လှုံ့ဆော်။ ဤ (Succu et al ။ , 2) ဖြင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ကိုသက်ဝင်, dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွင်းပိုင်း Ca2008 + ရောက်လာတိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုဒ်မ3ကိုကြည့်ပါ) နှင့်အတူကှဲလှဲမှာ, အလှည့်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ဤအရပ်မှသိသိ GMP များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်, guanylate cyclase မြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဒီယန္တရားနှင့်အညီ, ဖြစ်စေဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin တစ်အစွမ်းထက် oxytocin ရန်, ဒါမှမဟုတ်က S-methyl-thio-ဌ-citrulline, အာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ၏ inhibitor တစ်အစွမ်းထက်သည်သို့ထိုးသွင်း caudal ventral tegmental ဧရိယာမတိုင်မီ oxytocin, penile စိုက်ထူဖျက်သိမ်းနှင့်နျူကလိယ၏အခွံထဲမှာအပို-ဆယ်လူလာ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်တိုး oxytocin အားဖြင့်သွေးဆောင် accumbens ။ အဆိုပါ caudal ventral tegmental ဧရိယာနှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုအတွက်တိုးအပို-ဆယ်လူလာ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုသို့ထိုးသွင်းသည့်အခါသို့ထိုးသွင်း oxytocin နှင့်အတူတွေ့ရှိရအဖြစ်ထိုမှတပါး, 8-bromo-သိသိ GMP တစ်ခုတက်ကြွ phosphodiesterase-ခံနိုင်ရည်သိသိ GMP analogue, penile စိုက်ထူ induces အဆိုပါ caudal ventral tegmental ဧရိယာ (Succu et al, 2008; ။ Melis et al, 2009a ။ ) (ပုံ2ကိုလည်းကြည့်ပါ။ ) ။
အမြဲတမ်းဒီယန္တရားနှင့်အညီ, haloperidol ထဲမှာ, နျူကလိယ၏အခွံထဲသို့ထိုးသွင်းနေတဲ့အစွမ်းထက် dopamine D2 အဲဒီ receptor ရန်, အ ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်း oxytocin အားဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူလျော့ကျစေပါတယ် accumbens (Melis et al ။ , 2007) ။ အထက်ပါယန္တရားကိုလည်း oxytocin အမျှင်ယခင်က Fluorogold နျူကလီးယပ် accumbens (များ၏ shell ကိုသို့ထိုးသွင်းသည့် retrograde tracer နှင့်အတူတံဆိပ်ကပ်ခဲ့ကြရသော caudal ventral tegmental ဧရိယာအတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အပေါ် impinge ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းနှစ်ချက် immuno-fluorescent လေ့လာမှုများကထောက်ခံနေသည် Melis et al, 2007; ။ Succu et al, 2008) ။ ။ ယင်းနျူကလိယတွင်ဤ dopaminergic အာရုံခံနှင့် dopamine receptors တွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုဖြင့်မှထုတ်လုပ်တဲ့ oxytocinergic အာရုံခံသက်ဝင်ခြင်း, paraventricular နျူကလိယအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန် incerto-hypothalamic dopaminergic အာရုံခံလှုံ့ဆော်ပေးသောသေးဖော်ထုတ်ခံရဖို့အာရုံကြောလမ်းကြောင်း၏ activation မှအလှည့်ထဲမှာခဲ accumbens ကျောရိုးနှင့် penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေ (အထက်နှင့် Melis et al ကြည့်မြင် 2007; ။ Succu et al, 2007, 2008 ။ ) ။ အမှန်စင်စစ် penile စိုက်ထူသွေးဆောင်တဲ့ဆေးထိုးမှာ caudal ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်း oxytocin သည်နျူကလိယ accumbens ကနေ, ဒါပေမယ့်လည်း paraventricular နျူကလိယ (Succu et al ။ , 2007) မှမသာရရှိသော dialysate အတွက်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။
2.3 ။ အဆိုပါ hippocampus
အဆိုပါ hippocampus ၏ CA1 လယ်ကွင်း oxytocinergic အမျှင်ကြွယ်ဝအခြားဦးနှောက်ဧရိယာခဲ့သည် နှင့် oxytocin ၏ဆေးထိုးသွေးဆောင်ရာအတွက်အစောပိုင်းကလေ့လာမှုများ penile စိုက်ထူခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ် receptors (; Sofroniew, 1978 Bujis, 1983 ကြည့်ပါ) ။ သို့သော် paraventricular နျူကလိယနှင့်အတူကှဲလှဲမှာ, ဒီမှာ oxytocin မြန်မာနိုင်ငံသနှင့် paraventricular နျူကလိယအတွက်တက်ကြွစွာတွေ့ရှိခဲ့များထက်ပိုမိုမြင့်မားဆေးများမှာထိုးသွင်းတဲ့အခါမှသာ penile စိုက်ထူ inducing နိုင်စွမ်းရှာတွေ့ခဲ့သည် (။ Melis et al, 1986; ချန် et al, 1992 ။ ) ။ အဆိုပါ subiculum သို့ oxytocin ၏ထိုး, ဤအစောပိုင်းကလေ့လာမှုများအတွက်မလှုပ်ရှားတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်မကြာသေးမီနှင့်ပိုပြီးသတိထား microinjection လေ့လာမှုများတစ်ဦး၏မှတ်ပုံတင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ အဆိုပါ ventral subiculum ၏ဒေသ သော oxytocin ၏ဆေးထိုးတဲ့ထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌ penile စိုက်ထူ inducing နိုင်စွမ်းခဲ့ (Melis et al ။ , 2009b) ။ ဒီဦးနှောက်ဧရိယာသို့ထိုးသွင်း oxytocin ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှု (Melis et al ။ , 2007) တစ်ဖက်သတ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၌တက်ကြွစွာတွေ့ရှိခဲ့သူတို့အားအလားတူဆေးများမှာလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်, ထို paraventricular နျူကလိယမှာတွေ့ရှိအဖြစ်။ ကြည့်ရသည်မှာသည် ventral subiculum သို့ထိုးသွင်း oxytocin နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးစေနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ်အာရုံခံအတွက် oxytocinergic receptors ကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ intercellular တမန် penile စိုက်ထူဖို့ဦးဆောင်အချိုမှုအက်ဆစ် neurotransmission မြှင့်လုပ်ဆောင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်နေဖြင့်အလှည့်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်, ဖြစ်နိုင်သည် ventral subiculum ကနေအာရုံကြော (glutamatergic) efferent စီမံချက်များမှတဆင့် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ (ဥပမာ, အ ventral tegmental ဧရိယာသည် prefrontal cortex, အ paraventricular နျူကလိယ) (။ Succu et al, 2007 အောက်တွင်ကြည့်ပါနှင့် Melis, 2009, 2008b) ၏လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲပစ်အပို-hippocampal ဦးနှောက်ဒေသများဖြစ်သည်။
အရေးယူဒီယန္တရား oxytocin penile စိုက်ထူသွေးဆောင်ကြောင်းဆေးများမှာ ventral subiculum သို့ထိုးသွင်းကြောင်းပြသရာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နှောက် microdialysis စမ်းသပ်ချက်ကထောက်ခံနေသည်, ထို ventral subiculum (Melis et al ထံမှ dialysate အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် extracellular အချိုမှုအက်ဆစ်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ , 2010) နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine ၏ (Melis et al ။ , 2007) ။ ဤရွေ့ကားတုံ့ပြန်မှုဟာ oxytocin အဲဒီ receptor ရန်ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin အသုံးပြုပုံဒါပေမယ့်လည်းအာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase inhibitor က S-methyl-thio-lcitrulline အားဖြင့်၎င်း, ပေးခဲ့သောနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် scavenger ဟေမိုဂလိုဘင်အားဖြင့်သာ antagonized ခဲ့ကြသည် မိနစ်အနည်းငယ်မတိုင်မီ oxytocin အဆိုပါ ventral subiculum (Melis et al ။ , 2010) သို့။
ထို့အပွငျအရေးယူမှု၏ဤယန္တရားနှင့်အညီ, NMDA အားဖြင့် glutamatergic neurotransmission ၏တက်ကြွစွာ ventral subiculum သို့ထိုးသွင်း penile စိုက်ထူ (Melis et al ။ , 2010) ဖြစ်ပေါ်သည်။ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine တို့၏စီးပွါးစေသော ventral subiculum ထံမှ efferent ပရိုဂျက်၏ phenotype, ပစ္စုပ္ပန်မှာမသိနိုင်ပါဘူး။ သို့သော် ventral subiculum သို့ထိုးသွင်း oxytocin အားဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူသည့် ventral tegmental ဧရိယာကနေ dialysate အတွက်, ဒါပေမယ့်မနျူကလိယကနေအပို-ဆယ်လူလာအချိုမှုအက်ဆစ်တစ်ခုတိုးဖို့ concomitantly ဖြစ်ပေါ်ပြီးကတည်းက accumbens နှင့် (+) MK-801 အားဖြင့် antagonized သည် အဆိုပါ NMDA မျိုးကွဲ (Woodruff et al ။ , 1987) ၏ excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် receptors တစ်အစွမ်းထက် Non-ယှဉ်ပြိုင်ရန်, (ပုံ။2နှင့် Melis et al ကြည့်ပါ။ , 2009b) ဒါပေမယ့်မနျူကလိယ accumbens ထဲမှာ, ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်း , ဤစီမံချက်များအလှည့်အတွက်နျူကလိယ accumbens မှထုတ်လုပ်တဲ့ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်သော ventral tegmental ဧရိယာအတွက် glutamatergic neurotransmission ၏ activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပြုလုပ်ဖွယ်ရှိသည်။ အဆိုပါ ventral subiculum သို့ထိုး oxytocin ပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာတှငျတှေ့အချိုမှုအက်ဆစ်၏တိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် subiculum အတွက်သို့မဟုတ်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများထဲမှအာရုံခံကနေဖြန့်ချိမှုရှိမရှိ (ဥပမာ, အ prefrontal cortex) ပစ္စုပ္ပန်မှာမသိနိုင်ပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဒီ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine တစ်ခုတိုးလာလွှတ်ပေးရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. ဤတွင် dopamine receptors ၏ activation ဖြင့်ကျောရိုးမှထုတ်လုပ်တဲ့ oxytocinergic အာရုံခံသက်ဝင်နှင့် penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေခြင်း, paraventricular နျူကလိယအတွက် dopamine ထုတ်, incerto-hypothalamic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation မှဦးဆောင် (အထက်နှင့် Melis et al ကြည့်မြင် 2007, 2009a; ။ ။ Succu et al, 2008) ။
2.4 ။ အဆိုပါ amygdala
အဆိုပါ amygdala oxytocin အမျှင်များနှင့် receptors ကြွယ်ဝအခြားဦးနှောက်ဧရိယာ (။ Vaccari et al, 1987; ။ ။ Uhl-Bronner et al, 1998 Freund-Mercier et al ကြည့်မြင် 2005) ဖြစ်ပါသည်။ oxytocin ကဒီမှာ (Kondo et al တွေ့မြင်လူသားတွေအတွက် anxiolysis, လူမှုရေး memory နဲ့သိမှတ်ခံစားမှု, လူမှုရေးအရအားဖြည့်သင်ယူမှု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာနာ, စိတျပိုငျးဆိုငျရာမကျြနှာကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ကြောက်ထံမှ erectile function ကိုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရန်, ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ထင်သည် 1998; ။ Dominguez et အယ်လ်, 2001; ။ Ebner et al, 2005; ။ Huber et al, 2005; ။ အမိုးခုံး et al, 2007; ။ ရော့ et al, 2008; ။ Lee က et al, 2009; ။ Donaldson နှင့်လူငယ်တို့, 2009; Hurlemann et al ။ , 2010) ။ သို့သော် amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယထဲမှာသွေးဆောင်သောအခါအအထီးကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူသွေးဆောင် oxytocin များ၏စွမ်းရည်ကိုသာမကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် (Melis et al ။ , 2009b) ။ ဤသည်တုံ့ပြန်မှု ventral subiculum သို့ oxytocin ဆေးထိုးပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့သကဲ့သို့, နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုထံမှရရှိသော dialysate အတွက်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးနှင့်အတူ concomitantly ဖြစ်ပွားခဲ့သည် (Melis et al ။ , 2009b) ။ oxytocin အဆိုပါ amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းသောယန္တရား penile စိုက်ထူယခုအချိန်တွင်မသိနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပေါ်သည်။ အဆိုပါရရှိနိုင်သည့်ဒေတာနှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်မှုဟာ oxytocin အဲဒီ receptor ရန်ဃ (CH2) 5Tyr (ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်အဖြစ် penile စိုက်ထူနှင့်နျူကလိယ accumbens ထံမှရရှိသော dialysate အတွက်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်တိုးနှစ်ဦးစလုံး, oxytocinergic receptors ၏ activation ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်ကိုပြသ ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin မတိုင်မီ oxytocin အဆိုပါ amygdala နျူကလိယမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းထိုးသွင်း (Melis et al ။ , 2009b) ။
ယန္တရား oxytocin အဆိုပါ amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယအတွင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်သမျှဟာ peptide အားဖြင့်သွေးဆောင်လိင်တုံ့ပြန်မှုနျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုသို့နှင့် (အတူ NMDA receptors တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ထိုးသွင်း CIS-flupenthixol နှင့်အတူအားလုံး dopaminergic receptors တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်ဖျက်သိမ်းနေသည် အဆိုပါ ventral subiculum (Melis et al ။ , 801b) သို့ထိုးသွင်း oxytocin အားဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူတွေ့ရှိအဖြစ် +) MK-2009, ဒါပေမယ့်မနျူကလိယ accumbens သို့, ထို ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်း။ ဒါက amygdala ၏ posteromedial နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း oxytocin အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအချိုမှုအက်ဆစ် neurotransmission မြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤသည် penile စိုက်ထူရန်ဦးဆောင် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation အတွက်ဖွင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (။ Canteras et al, 1995; ပြင်သစ်နှင့် Totterdell, 2003) ကို ventral subiculum အတူ amygdala ၏ဤနျူကလိယ interconnecting အာရုံကြောလမ်းကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းလေ့လာမှုများ၏အမြင်တွင်ဤတွေ့ရှိချက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ပေမယ့်တစ်ဦးအပြန်အလှန်အဲဒီနှစ်ခုဦးနှောက်ဧရိယာများအကြားတည်ရှိနေစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့် အဆိုပါ amygdala ကနေ accumbens သည့်နျူကလိယမှဒါမှမဟုတ် ventral tegmental ဧရိယာမှဖြစ်စေလမ်းကြောင်း (; Witter, 1982 ကယ်လီနှင့် Domesick, 2006) ဖော်ပြထားပါပြီ။
2.5 ။ အဆိုပါကျောရိုး
အဆိုပါကျောရိုး oxytocinergic အမျှင်များနှင့် receptors ပါဝင်သောဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အခြားနယ်မြေဖြစ်ပါတယ် (Freund-Mercier et al, 1987; ။ Uhl-Bronner et al, 2005 ။ ), oxytocin penile စိုက်ထူ (Tang et al, 1998 induces သော။ ; Veronneau-Longueville et al, 1999; ။ Giuliano နှင့် Rampin, 2000; Giuliano et al, 2001) ။ ။ အထက်ပြန်ပြောပြအဖြစ်ဤ oxytocinergic အမျှင်ဟာ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယထဲမှာအစပြုနှင့် penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေကျောရိုးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာရုံခံထိန်းချုပ်လမ်းကြောင်းဆင်းဖို့ကူညီသည်။ အမှန်စင်စစ်ထိုအအမျှင်ကျောရိုးအာရုံကြောဆဲလ်နှင့်အတူ thoraco-lumbar နှင့် lumbo-sacral ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ dorsal ဦးချို preganglionic စာနာခြင်းနှင့် parasympathetic ဆဲလ်ကော်လံအတွက် Synaptic အဆက်အသွယ်လုပ် penile လိုဏ်ဂူ corpora (Marson နှင့် McKenna, 1996 innervating; Giuliano နှင့် Rampin, 2000; Giuliano et al ။ , 2001) ။ ဤရွေ့ကား Synaptic အဆက်အသွယ်ကျောရိုးအာရုံကြောဆဲလ်လိင်တံထဲမှနှင့်နှစ်ဆ immuno-ချောင်းနှင့် confocal လေဆာ microscopy လေ့လာမှုများ (Tang et al နှင့်အတူပေါင်းစပ်လိုဏ်ဂူ corpora သို့ထိုးသွင်းတိကျတဲ့ retrograde tracers နဲ့ကျောရိုးရောက်ရှိများတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအားဖြင့်သရုပ်ပြခဲ့သည်, 1998; ။ Veronneau-Longueville et al ။ , 1999) ။ ဤ lumbo-sacral မှာ oxytocin ၏စုပေါင်းဆေးများ၏ anaesthetized အထီးကြွက် intrathecal ဆေးထိုးအတွက်လေ့လာမှုများ, ဒါပေမယ့်မ thoraco-lumbar အဆင့်မှာနဲ့အညီတစ်ဦးထိုးမှီခိုထုံးစံ၌ intracavernous ဖိအားမြင့်တက်ရူးနှမ်း။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin နှင့်အတူ oxytocinergic အဲဒီ receptor ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်နှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းအာရုံကြောများအပိုင်းအားဖြင့်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရ (Giuliano နှင့် Rampin, 2000; Giuliano et al, 2001 ။ ) ။ ဤရလဒ်သည် oxytocin, အ lumbo-sacral ကျောရိုးမှာသရုပ်ဆောင်, intracavernous ဖိအားတိုးပွါးကြောင်းသရုပ်ပြ, နှင့် paraventricular နျူကလိယ၏ဇီဝကမ္မ activation စဉ်အတွင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ oxytocin, ထိုလိုဏ်ဂူ corpora မှထုတ်လုပ်တဲ့ကျောရိုးလိုလားသူ erectile အာရုံခံတဲ့အစွမ်းထက် Active ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ oxytocin ကိုလည်း medulla oblongata (Marson နှင့် McKenna, 1992 ၏ reticular ဖွဲ့စည်းခြင်း၏နျူကလိယ paragigantocellularis ထဲမှ serotoninergic အာရုံခံထံမှ Synaptic အဆက်အသွယ်ခံယူ၎င်း၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုမှပြုမူသောစိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီလိုလားတဲ့ erectile ကျောရိုးအာရုံကြောဆဲလ်; တန် et al ။ , 1998) ။ ဤအ serotoninergic အာရုံခံ၏အဗဒ္ဒုန် (; ကြီးတွေ et al, 1992, Marson နှင့် McKenna 1992 ။ ) အထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် penile တုံ့ပြန်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ intracerebroventricularly, ဒါပေမယ့်မ paraventricular နျူကလိယသို့ငါအပ်တဲ့အခါမှာ penile စိုက်ထူလွယ်ကူချောမွေ့ 5HT2C receptors လှုံ့ဆော်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးနှင့် dopamine ရန် 5HT2C agonist-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူ (လျော့ချပါဘူးနေချိန်မှာကြောင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု 5HT2C receptors လည်း dopamine agonistand oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူလျော့ချကြောင်းမူးယစ်ဆေးကတည်းက Stancampiano et al ။ , မြို့သား 1994 နှင့်ကိုးကား) ကိုကြည့်ပါက, လည်း), ။ oxytocin အဆိုပါ lumbo-sacral ကျောရိုး (Stancampiano et al များ၏အဆင့်မှာလိုလားသူ erectile 5HT2C receptors ၏အရေးယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းအကြံပြု 1994 ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအား oxytocin သည့်နျူကလိယတွင်တိုက်ရိုက်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကျောရိုးဆင်း serotoninergic အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, ထိုအအာရုံခံအစပြုရှိရာ (Stancampiano et al ကြည့်ပါ။ , 1994), paragigantocellularis ။
3 ။ ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်နှင့် penile စိုက်ထူအတွက် oxytocin, dopamine နဲ့အချိုမှုအက်ဆစ်များအကြားဆက်သွယ်မှုသည်
ပုဒ်မ 1 အတွက်ပြန်ပြောပြသည်အတိုင်း, ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်အားလုံး oxytocinergic အာရုံခံအဆိုပါ paraventricular နျူကလိယနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အဆောက်အဦများအတွက်အစပြုတာဖြစ်တယ်။ ဤအအာရုံခံများ၏လုပ်ဆောင်မှုကွဲပြားခြားနားသော neurotransmitters နှင့် / သို့မဟုတ် neuropeptides များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ paraventricular အဆင့်မှာလေ့လာခဲ့များထဲတွင် dopamine, အချိုမှုအက်ဆစ်, gamma-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား), နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်, endocannabinoids, opioid peptides, ကြီးထွားဟော်မုန်း-releasing peptides, VGF-related peptides နှင့် oxytocin သူ့ဟာသူဖြစ်ကြသည်။ Dopamine, အချိုမှုအက်ဆစ်, peptides လွှတ်ကြီးထွားဟော်မုန်း, VGF-ဆင်းသက်လာ peptides နှင့် oxytocin stimulatory ဖြစ်ကြောင်း, ထို paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာဂါဘမြို့သား, opioid peptides နှင့် endocannabinoids inhibitory နေစဉ်ဥပမာအဲဒီဒြပ်ပေါင်းများနှင့်၎င်းတို့၏ agonists, penile စိုက်ထူလွယ်ကူချောမွေ့, ဥပမာ, ဤဓာတုဒြပ်ပေါင်း သို့မဟုတ်မိမိတို့၏ agonists penile စိုက်ထူတားစီး (; Witt နှင့် Insel, 1994; Argiolas နှင့် Melis, 1994, 1995, 2004; Giuliano နှင့် Rampin, 2005, 2000; McKenna, 2004; Andersson, 2000; Meisel နှင့် Sachs, 2001 ကြည့်ပါ။ Hull et al, 2002) ။
စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများသည်ဤ oxytocinergic အာရုံခံနှင့်အထက် neurotransmitters နှင့် neuropeptides erectile function ကိုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဇီဝကမ္မအခင်းအကျင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, ထိုကဲ့သို့သော ventral tegmental ဧရိယာသည် hippocampus နှင့်၎င်း၏ဒေသများအဖြစ်အပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဒေသများအတွက်ဖြန့်ချိ oxytocin, အ amygdala နှင့်ကျောရိုး oxytocinergic synapses impinge သောသူတို့အားအာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်တွင်မှာဧကန်အမှန်နှင့်အတူဖော်ထုတ် oxytocinergic synapses impinge ထားတဲ့အပေါ် penile စိုက်ထူများအတွက်အရေးကြီးသောတစ်ခုတည်းသောအာရုံခံသည်, နျူကလိယ accumbens (Melis et al ၏ shell ကိုမှထုတ်လုပ်တဲ့ယင်း caudal ventral tegmental ဧရိယာ၏ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်ဖြစ်ကြ၏။ , 2007 ; Succu et al, 2008), နှင့်လိုဏ်ဂူ corpora ဖို့ lumbo-sacral ကျေးရွာအုပ်စုကနေထုတ်လုပ်တဲ့လိုလားသူ erectile ကျောရိုးအာရုံကြောဆဲလ် (Giuliano နှင့် Rampin, 2000 ကိုကြည့်ရှုလော့။ ။ Giuliano et al, 2001) () ကိုလည်းကဏ္ဍများ 2.2 နှင့် 2.5 တွေ့မြင် ။ အမှန်စင်စစ်, oxytocinergic synapses နှင့် receptors ကိုလည်း ventral subiculum, အ amygdala နှင့်ကျောရိုးကြီးသားအပေါင်းတို့, penile စိုက်ထူများအတွက်အရေးကြီးသောနေသောဒေသများ (အထက်ပါကြည့်ပါ) အတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပေမယ့်အပေါ်အာရုံခံတွင်ဤဒေသများရှိ neurotransmitter / s အမျိုးအစားပစ္စုပ္ပန် အရာ oxytocinergic အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်, impinge နေဆဲမသိရှိပါ။
ပြန်လည်သုံးသပ်ဤအပိုင်းကိုခေတ္တမျှ caudal ventral tegmental ဧရိယာသည် hippocampus ၏ ventral subiculum သို့နှင့်ကျောရိုးထဲမှာထိုးသွင်း oxytocin ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေခံသည့်ယန္တရားများပေါ်တွင်မကြာသေးမီကစာပေအကျဉ်းချုပ်။ အထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကဤဒေသများရှိ dopamine နဲ့အချိုမှုအက်ဆစ်နှင့်အတူနှင့်ဤအပြန်အလှန် erectile function ကို၏ဗဟိုထိန်းချုပ်ကစားစေခြင်းငှါအခန်းကဏ္ဍအပေါ် peptide များ၏အပြန်အလှန်အားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ လည်း erectile function ကိုတစ်ဦးသော့ချက်အခန်းကဏ္ဍသော paraventricular နျူကလိယအတွက် oxytocinergic အာရုံခံအပေါ် dopamine နဲ့အချိုမှုအက်ဆစ်၏သက်ရောက်မှု၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်အဖြစ်, ဒီလယ်ပြင်၌သုတေသန၏အစောပိုင်းပြည်နယ်၏စာဖတ်သူသတိပြုမိစေရန်အလို့ငှာ, ပထမဦးဆုံးသည် ဒီလေ့လာမှုတွေပြီးသား (; 1995, Melis နှင့် Argiolas Argiolas နှင့် Melis, 2004, 2005, 2003 ကိုကြည့်ပါ) ကျယ်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, အထူးသဖြင့်အာရုံကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် (penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိ) တွင်, ဒါပေမယ့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထဲမှာမသာ dopamine-oxytocin link ကိုနှင့်တစ်ဦးအချိုမှုအက်ဆစ်-oxytocin link ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုထားတဲ့လတ်တလောရလာဒ်များ, အားပေးနေပါတယ် arousal နှင့်လိင်လှုံ့ဆျောမှု။
3.1 ။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယအတွက် Dopamine-oxytocin အပြန်အလှန်
အဆိုပါ အလယ်ပိုင်း oxytocinergic အာရုံခံသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူသွေးဆောင် dopamine agonists ၏စွမ်းရည် (1987 ။ Melis et al) က paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ apomorphine penile စိုက်ထူ induces ကြောင်းချက်ချင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပြီးတွင်အကြံပြုအခါ oxytocin အဲဒီ receptor ရန်ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin intracerebroventricularly (icv) ထိုးသွင်းခံခဲ့ရရှာတွေ့ခဲ့သည် penile လုံးဝနီးပါးအရေပြားအောက်ဆုံးပေးထားပေးထား icv oxytocin အသုံးပြုပုံဒါပေမယ့်လည်း apomorphine အားဖြင့်သာသွေးဆောင်စိုက်ထူ, လျှော့ချရန် (Argiolas et al ။ , 1987b) နိုင်ကြ။ ဤရလဒ်သည်ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin icv ပေးထားခဲ့ apomorphine အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယသို့တိုက်ရိုက်ပေးသောအခါအလားတူရလာဒ်များဖေါ်ပြခြင်းကတခြားလေ့လာမှုသေူနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ကြ (အယ်လ် Melis et ။ , 1989b), ဌကြောင်း dopamine agonists အပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများနှင့်ကျောရိုးဖို့အထူးသဖြင့်ထုတ်လုပ်တဲ့ paraventricular oxytocinergic အာရုံခံသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူသွေးဆောင်အကြံပြု eading (Argiolas နှင့် Melis, 1995, 2004, 2005 ကြည့်ပါ) ။ ဒီယူဆချက်နှင့်အညီ, anaesthetized ကြွက်အတွက် lumbo-sacral oxytocinergic receptors ၏ပိတ်ဆို့ non-peptide oxytocin အဲဒီ receptor ရန်မကြာသေးမီကအဘို့သက်သေအထောက်အထားပေးက, dopamine agonist apomorphine အားဖြင့်သွေးဆောင် intracavernous ဖိအား apomorphine-သွေးဆောင်မြင့်တက်ဖျက်သိမ်းခြင်းနိုင်စွမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ထားပြီးအားဖြင့် penile စိုက်ထူ (Baskerville et al ။ , 2009) တွင်ပါဝင်ပတ်သက် paraventriculo-ကျောရိုး oxytocinergic လမ်းကြောင်း။
အဆိုပါရည်ရွယ်လေ့လာရေး penile စိုက်ထူ၏ induction များအတွက်တာဝန်ရှိသည့် dopamine အဲဒီ receptor ၏မှတ်ပုံတင်လည်း paraventricular နျူကလိယ dopamine အဲဒီ receptor အတွက် agonists အဆိုပါ D2 မိသားစု၏ dopamine receptors အပေါ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူသွေးဆောင်ကြောင်းထင်ရှား, system ပေးထား dopamine အဲဒီ receptor agonists နှင့်အတူတွေ့ရှိရအဖြစ် (Melis et al ကြည့်မြင် 1987; ။ ။ Eaton et al, 1991; Melis နှင့် Argiolas, 1995a) ။ ထို့ကြောင့် apomorphine တစ်အစွမ်းထက်ရောထွေး D1 / D2 အဲဒီ receptor agonist နှင့် quinpirole တစ်အစွမ်းထက် selectiveD2receptor agonist, သို့သော်ဤ hypothalamic နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း SKF 38393 တစ်ဦးရွေးချယ် D1 အဲဒီ receptor agonist တစ်ထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌ penile စိုက်ထူသွေးဆောင်နိုင်တွေ့ရှိခဲ့သည်မဟုတ် , ဤ D2 အဲဒီ receptor agonists အားဖြင့်သွေးဆောင်လိင်တုံ့ပြန်မှုထိုကဲ့သို့သော haloperidol နှင့်ဌ-sulpiride အဖြစ် D2 အဲဒီ receptor ရန်, အသုံးပြုပုံသော်လည်းမ SCH 23390 တစ်ဦးရွေးချယ် D1 အဲဒီ receptor ရန် (Melis et al ။ , 1987) ကဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ penile စိုက်ထူသွေးဆောင် apomorphine များ၏စွမ်းရည်ကိုလည်း paraventricular နျူကလိယသို့ပေးသော dopamine agonist စနစ်တကျသွေးဖိအား (Chen က et al ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲနိုးအထီးကြွက်များတွင် intracavernous ဖိအားတိုးမြှင့်နိုင်ပါကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းပေးပို့စနစ်များလေ့လာမှုများကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ , 1999; စနစ်တကျဆေးထိုးပြီးနောက်တွေ့ရှိခဲ့အဖြစ် Giuliano နှင့် Allard, 2001), (ဘာ et al, 1999) ။ ။ ဒီလေ့လာမှုတွေလည်း အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ D2 အဲဒီ receptor agonists များသောအားဖြင့် intracavernous ဖိအားတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်အဖြစ်, D1 receptors ၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍအတည်ပြုခဲ့သည် (Chen က et al ။ , 1999) ။
စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများအဘယ်သူ၏ဆွ penile စိုက်ထူ induces paraventricular D2 receptors, oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်တွင်တည်ရှိသောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုပြီးတော့ရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးစွာ paraventricular နျူကလိယဒါဟုခေါ်တွင် incertohypothalamic dopaminergic အာရုံခံပိုင်ကြောင်း dopaminergic အာရုံကြောဆိပ်ကမ်းပါရှိသည်။ ဤအအာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်တို့ကို A13 နှင့် A14 အုပ်စုတွင်တည်ရှိပြီးနေကြတယ် Dahlstrom နှင့် Fuxe (1964), ကျယ်ကျယ် arborize နှင့် neurohypophysis ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်အပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဒေသများသို့ထုတ်လုပ်တဲ့ paraventricular oxytocinergic အာရုံခံအပါအဝင် innervate အများအပြား hypothalamic အဆောက်အဦများ, (။ Lindvall et al, 1984 ။ Buijs et al, 1984) ၏။
penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိထိန်းချုပ်မှုအတွက် paraventricular အဆင့်မှာထိုအ dopaminergic အာရုံခံများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဟာ extracellular dopamine ၏ပြင်းအားနှင့် 3,4-dihydroxyphenylacetic အက်ဆစ် (DOPAC), ၎င်း၏အဓိက metabolite ထံမှရရှိသော dialysate အတွက်တိုးပွားလာသည်ဟုဖေါ်ပြခြင်း microdialysis လေ့လာမှုများကထောက်ခံနေသည် တစ်ဦးတပိုင်တနိုင် ovariectomized အီစထိုဂျင် + ချို့ယွင်းသော-ရစေတယ်လက်ခံအမျိုးသမီး (Melis et al ။ , 2003) ၏ရှေ့တော်၌ထားသောအခါအ noncontact စိုက်ထူဖေါ်ပြခြင်းလိင်အစွမ်းထက်အထီးကြွက်များ၏ paraventricular နျူကလိယ။
အဆိုပါလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူသုတ်ရည်ထိ (Melis et al ။ , 2003) ခွင့်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်အခါ medial preoptic ဧရိယာ (Hull et al ။ , 1995) နှင့်နျူကလိယ accumbens တှငျတှေ့အဖြစ်အဆိုပါ dopamine ၏တိုးနှင့် DOPAC ပြင်းအား (Pfaus ပင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ နှင့် Everitt, 1995) ။ ဒုတိယအချက်မှာအများအပြားလေ့လာမှုများ paraventricular D2 receptors ၏ဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူဤဒေသများအတွင်းဖြန့်ချိ oxytocin ကကမကထပြုခဲ့ကြောင်းပြသပါ။ ထို့ကြောင့် penile စိုက်ထူသွေးဆောင်ကြောင်းဆေးများမှာပေးထား apomorphine, မသာကြွက်များနှင့်မျောက်များ၏သွေးရည်ကြည်ထဲတွင် oxytocin အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ရှာတွေ့ခဲ့သည် (အယ်လ် Melis et, 1989a; ။ ။ ကင်မရွန် et al, 1992), ဒါပေမယ့်လည်းအပို-hypothalamic ဦးနှောက်ထဲမှာ ထိုကဲ့သို့သော hippocampus အဖြစ်ဒေသများ, (Melis et al ။ , 1990) ။ ဤအရလဒ်များကိုနှင့်အညီ, penile စိုက်ထူ induces တစ်ခုထိုးမှာ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း apomorphine မကြာသေးမီကနျူကလိယ accumbens တှငျလညျးအပို-ဆယ်လူလာ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု, အ oxytocin အဲဒီ receptor ရန်ဃ (CH2) ကလျှော့ချကာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်စေဖို့ပြသခဲ့သည် 5Tyr အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်း (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin (Succu et al, 2007; ။ ။ Melis et al, 2009a) (အစပုဒ်မ4ကြည့်ပါ) ။ လုံးဝနီးပါးပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများ (Hawthorn et al ။ , 1985) မှ oxytocin ပပျောက် apomorphine-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူ (Argiolas et al ။ , 1987a), နှင့်ရွေးချယ် oxytocin အဲဒီ receptor ရန်ဖျက်သိမ်းပြီးသော paraventricular နျူကလိယ၏တတိယနှစ်နိုင်ငံလျှပ်တွေ့ရှိရပါသည်, အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricles သို့ငါအပ်ပေမယ့်မ paraventricular နျူကလိယသို့ oxytocin receptors ပိတ်ဆို့ခြင်းတွင်ဤဓာတုဒြပ်ပေါင်း၏တစ်ဦးအာနိသင်အပြိုင်အတူထိုး-ရသည် apomorphineinduced penile စိုက်ထူလျှော့ချ (Melis et al ။ , 1989b) ။ oxytocin အဲဒီ receptor ရန် oxytocin အသုံးပြုပုံဒါပေမယ့်လည်း apomorphine အားဖြင့်သာသွေးဆောင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ပံ့ပိုးလျှော့ချတွင်လည်းအလွန်အစွမ်းထက်များမှာ (Argiolas et al ။ , 1988, 1989) ။
dopamine သို့မဟုတ် dopamine အဲဒီ receptor agonists အားဖြင့် activated သော D2 receptors သည့်ယန္တရားအဖြစ်, အားဖြင့် extrahypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများနှင့်ကျောရိုးထဲမှာ oxytocin ထုတ်, oxytocinergic အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်, မြောက်မြားစွာစမ်းသပ် data တွေကို s ကိုD2 receptors ၏ဆွနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ၏ activation မှဦးဆောင် oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွင်းပိုင်း intracellular Ca2 + အိုင်းယွန်းများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွါးကြောင်း upport အဆိုပါယူဆချက်, တစ်ဦး Ca2 သည်ဤဆဲလ်အသေကောင်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သော + -calmodulin-မှီခိုအင်ဇိုင်း, (ဗင်းဆင့်နှင့် Kimura, 1992; တောရက်စ် et al, 1993; ။ Sanchez et al, 1994; ။ Sato-ဆူဇူကီး et al, 1998 ။ ) ။ အဆိုပါတိုးမြှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုအလှည့်အတွက် oxytocinergic အာရုံခံ၏ activation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် (1), penile စိုက်ထူအော်ဂဲနစ်ကယ်လစီယမ်ရုပ်သံလိုင်း blockers နှင့် by_-conotoxin GVIA နေဖြင့်တားဆီးခဲ့ paraventricular သို့ပေးသော N-type အမျိုးအစား (McCleskey et al ။ , 2) ၏ဗို့အား-မှီခို Ca1987 + ချန်နယ်လ်တစ်ခုအစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် blocker, apomorphineinduced နျူကလိယ (မြို့သား Argiolas et al, 1990 နှင့်ကိုးကားကြည့်ရှုပါ။ ); (2) apomorphine-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူသည့် paraventricular နျူကလိယသို့ငါအပ်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase inhibitors နေဖြင့်တားဆီးခဲ့သည် (။ အယ်လ် Melis et, 1994c); နှင့် (3) apomorphine နှင့် penile စိုက်ထူသွေးဆောင်ကြောင်းဆေးများမှာပေးထားသည်အခြား D2 အဲဒီ receptor agonists, ကိုလျော့ချကြောင်းဆေးများမှာပေးထား paraventricular နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ၏ inhibitors လျှော့ချခဲ့ကာတိုးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နှောက် microdialysis ခြင်းဖြင့်ရရှိသော paraventricular dialysate အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးလာ D2 အဲဒီ receptor penile စိုက်ထူ (Melis et al ။ , 1996) agonistinduced ။ ရရှိနိုင်သည့်ဒေတာတစ်ခု intracellular တမန်အဖြစ်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်လုပ်ရပ်များအကြံပြုနှင့် guanylate cyclase ပါဝင်ပတ်သက်မဟုတ်ပါဘူးပေမယ့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် paraventricular oxytocinergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်သောနည်းလမ်းဖြင့်အဆိုပါယန္တရား, မသိရသေးပေ။ အမှန်စင်စစ်သိသိ GMP ၏တက်ကြွ phosphodiesteraseresistant analogue, 8-bromo-သိသိ GMP, (Melis နှင့် Argiolas, 2b နှင့်တကွကိုးကားကြည့်ပါ) paraventricular နျူကလိယ (ပုံ။ 1995) သို့ပေးထားသောအခါ, penile စိုက်ထူသွေးဆောင်နိုင်ခြင်းရှာတွေ့ခဲ့သည်။
အထက်ပါအနက်ကိုမကြာခဏ dopamine D2 receptors ၏ဆွများသောအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသော, G ပရိုတိန်း coupled ယန္တရားများမှတဆင့်တားစီးမယ့်အစား, ဤ receptors င်သည့်အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်များ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ coupled ဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားကြောင့်၎င်း, ယုံကြည်စိတ်ချမရစဉ်းစားထားသည် (Sokoloff နှင့် Schwartz, 1995 ကြည့်ပါ) ။ သို့သော် dopamine အားဖြင့် paraventricular oxytocinergic အာရုံခံ၏တိုက်ရိုက်ဆွနှင့်အညီသောဤကွာဟမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောရှင်းပြချက်, တစ်ဦး၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအားဖြင့်မကြာသေးမီကအကြံပြုထားသည် , G ပရိုတိန်း-coupled dopamine D4 အဲဒီ receptor, အ D2 အဲဒီ receptor မိသားစု (D2, D3 နှင့် D4) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး, အရာများ၏ဆွကဒီအဲဒီ receptor မျိုးကွဲ (Moreland et al ။ , 2) ၏ပုံတူမျိုးပွားဗားရှင်း်ဆဲလ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက် Ca2004 + ရောက်လာတိုးပွားစေပါသည်။ (System Brioni et al ပေးသောအခါ။ ပို. အရေးကြီးသည်, တစ်ဦးရွေးချယ် D4 အဲဒီ receptor agonist (ဥပမာ ABT 724) (N-methyl-4- (2-cyanophenyl) piperazynil-3methylbenzamide maleate) အထီးကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူ inducing နိုင်စွမ်းရှာတွေ့ခဲ့သည် 2004) ။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှု (N-dimethyl-2Himidazo, R-95666-dihydro-N ကို [5,6-i] quinolin-4-Amin) (Hsieh က et al 4,5,1 ။ ), အရွေးချယ် D5 အဲဒီ receptor မျိုးကွဲ agonist အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ-2004E နှင့်အတူတွေ့ရှိရသည့်မခံခဲ့ရ ထို့အပြင် D2 အဲဒီ receptor မျိုးကွဲများ၏ပုံတူမျိုးပွားဗားရှင်း်ဆဲလ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက် Ca4 + ရောက်လာတိုးမြှင့်ဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့တာ (။ Brioni et al, 2004; Moreland et al, 2004 ။ ) ။ အထက်ပါယူဆချက်နှင့်တွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, PD 168,077 (N-methyl-4- (2-cyanophenyl) piperazynil-3methylbenzamide maleate), PIP-3EA (2- [4- (2-methoxyphenyl) piperazin-1-ylmethyl] imidazo [1,2-တစ်ဦး] pyridine) နှင့်အခြားရွေးချယ် D4 အဲဒီ receptor agonists (Heier et al, 1997; ။ Melis et al, 2006b; ။ ။ Löber et al, 2009), system ထိုးသွင်းအခါ, penile စိုက်ထူသွေးဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ icv နှင့်သို့ခဲ့ကြသည် ပေမယ့်ဒီထက်ထိရောက်စွာ apomorphine ထက် paraventricular နျူကလိယ။ ဤအ D4 အဲဒီ receptor agonists ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှု L-745,870 (3- (4- [chlorophenyl] piperazin-1-yl) -methyl-1H-pyrrolo [2,3-B က] pyridine trihydrochloride) ကတားဆီးခဲ့ပါတယ်, တစ်ဦးရွေးချယ် D4 အဲဒီ receptor ရန် (Patel က et al, 1997; ။ Melis et al, 2005, 2006b; ။ ။ Löber et al, 2009) ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ D4 အဲဒီ receptor agonists အထက်၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase inhibitors လျှော့ချသည့် paraventricular နျူကလိယသို့ငါအပ်သနှင့်ဃအားဖြင့် (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin တစ်ဦးရွေးချယ် oxytocin အဲဒီ receptor ရန်ခဲ့သည် အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယအတွက် icv ပေးထားပေမယ့်မ။ apomorphine နှင့်ဂန္ထဝင် D4 agonists များအတွက်ပြထားတဲ့အတိုင်းထိုရလဒ်များ Melis et al (အလှည့်အတွက် penile စိုက်ထူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ရာ D2 အဲဒီ receptor agonists လည်းနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ကိုသက်ဝင်နှင့် extrahypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် oxytocin လွှတ်ခြင်းဖြင့် oxytocinergic အာရုံခံလှုံ့ဆော်သောအယူအဆနှင့်အတူလိုင်း၌ရှိကြ၏ ။ , 2005, 2006b; Löber et al, 2009) ။ ။
အထက်ပါတွေ့ရှိချက်များကိုလည်း dopamine paraventricular oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်တွင်တည်ရှိသော D4 receptors အပေါ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူ induces နှင့်အရာတခုကိုတိုးမြှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုမှဦးဆောင် oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်သို့တစ်ခုတိုးလာ Ca2 + ရောက်လာစေသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ အလှည့်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ပြီးသားဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, အပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများနှင့်ကျောရိုးထဲမှာ oxytocin လွှတ်ပေးရန် oxytocinergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း, dopamine receptors အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယအတွက် oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းမှတ်သားဖွယ်က သာမကြာသေးမီကမြင့်မားရွေးချယ် D2, D3 နှင့် D4 အဲဒီ receptor ပဋိနှင့် oxytocin ပဋိနှင့်အတူနှစ်ဆ immuno-fluorescent လေ့လာမှုများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများ paraventricular နျူကလိယအတွက် oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်သီးခြားစီ Co-ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီသမျှသုံး D2receptor Subtype (D2, D3 နှင့် D4) ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုပြသကြပါပြီ (နှင့်လည်း supraoptic နျူကလိယနှင့် medial preoptic ဧရိယာထဲမှာ) (Baskerville နှင့်ဒေါက်ဂလပ်, 2008; Baskerville et al, 2009) ။ ။
ဒါက D2 အမျိုးအစား dopamine နဲ့ dopamine အဲဒီ receptor agonists အထက်တွင်ပြန်ပြောပြသည့် extrahypothalamic ဦးနှောက်ဒေသများသို့ထုတ်လုပ်တဲ့တိုက်ရိုက် oxytocinergic အာရုံခံသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူသွေးဆောင်သောဖြစ်နိုင်ခြေဖို့ခိုင်မာတဲ့ neuroanatomical ထောက်ခံမှုပေးသည်ဥပမာ, အကျောရိုးသည် ventral tegmental ဧရိယာသည် hippocampus နှင့် amygdala ။ သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်များအဘယ်သူ၏ဆွဟာ erectile တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အဆိုပါ D2 အဲဒီ receptor မျိုးကွဲ / s အဆိုပါမှတ်ပုံတင်များအတွက်မည်သည့်အကူအညီကိုမပေးပါဘူး။ ကံမကောင်းစွာမရှိအကူအညီနဲ့ပင် paraventricular နျူကလိယအတွက် dopamine အဲဒီ receptor agonists အားဖြင့် activated oxytocinergic အာရုံခံဖော်ထုတ်ရည်ရွယ်လေ့လာမှုများမှရရှိသောနိုင်ပါသည်။ အမှန်မှာထိုအမျိုးမျိုးသော dopamine အဲဒီ receptor Subtype, ရောထွေး dopamine အဲဒီ receptor agonists (ဥပမာ apomorphine), သို့မဟုတ် (အားလုံး D2 အဲဒီ receptor Subtype အပေါ်ပြုမူရသောဥပမာ quinpirole) ရွေးချယ် D2 အဲဒီ receptor agonists ဖြစ်စေအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများ၏ကြားမှသို့မဟုတ်ရွေးချယ် D4 အဲဒီ receptor agonists စေ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ၏ parvocellular oxytocinergic အာရုံခံအတွက် FOS ပရိုတိန်း၏တိုးအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် oxytocinergic အာရုံခံ၏ activation, (Bitner et al ။ , 2006) ။ paraventricular oxytocinergic အာရုံခံအတွက် FOS ပရိုတိန်းတိုး penile စိုက်ထူအဓိကအား D2 နှင့် D3 အဲဒီ receptor Subtype ပေါ်သော်လည်းမ PD 168077 တစ် D4 အဲဒီ receptor agonist အားဖြင့်ပြုမူရသော quinerolane ကသွေးဆောင်ခဲ့သည်တဲ့အခါမှသာအတွေ့ခံအဖြစ်သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်သည်မကြာသေးမီက, မေးခွန်းထုတ်ထားသည် လိင်တုံ့ပြန်မှု (Baskerville et al ။ , 2009) သွေးဆောင်နှစ်ဦးစလုံးဒြပ်ပေါင်းများများ၏စွမ်းရည်များကြားမှ။
အခြား D2 အဲဒီ receptor Subtype (အဓိကအားဖြင့် D2 နှင့် D3) ၏ရွေးချယ် agonists နှင့်အတူနောက်ထပ်စမ်းသပ်ချက်ထို့နောက် paraventricular အဆင့်မှာ erectile function ကိုထိန်းချုပ်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ dopamine အဲဒီ receptor မျိုးကွဲများ၏အတိအကျအခန်းကဏ္ဍဖော်ထုတ်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း။ ပြီးသားမတိုင်မီပြန်ပြောပြအဖြစ်ဤကိစ်စတှငျအပေါင်းတို့, dopamine အဲဒီ receptor Subtype အပေါ်အစွမ်းထက်ပြုမူရသော apomorphine, (မြို့သား။ 2004 Brioni et al မြင်လျက်ညွှန်းဆို), ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ D4 အဆိုပါ paraventricular သို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ penile စိုက်ထူ inducing အတွက် agonists receptors ထက် နျူကလိယ။ အဆိုပါစမ်းသပ်ပြီး D4 အဲဒီ receptor agonists ၏နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါဒီ D4 receptors အပေါ် apomorphine တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဆှဖှေဲ့အားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်တနည်း, D4 အဲဒီ receptor agonists apomorphine မေလတွင်အားဖြင့် D4 အဲဒီ receptor တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonists, ဒါမှမဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသော dopamine အဲဒီ receptor Subtype ၏ concomitant activation အဖြစ်ပြုမူစေခြင်းငှါ သာ D2 အဲဒီ receptor မျိုးကွဲများ၏ D4 အဲဒီ receptor agonists အားဖြင့် activation ထက် penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေ oxytocinergic အာရုံခံတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မား activation, ထုတ်လုပ်ရန်။
dopamine D1 နှင့် D2 receptors အကြားအပြန်အလှန်ထားပြီး medial preoptic ဧရိယာ (Hull et al ကြည့်ပါ။ , 1989) ၏အဆင့်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုတှငျဖျောပွထားပါပြီ။ ရွေးချယ် D2 အဲဒီ receptor agonists ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း penile စိုက်ထူသွေးဆောင်သောအမှု၌ (Hsieh က et al ။ , 2004) အတည်ပြုခဲ့သည် (သို့သော်Depoortère et al ကြည့်ပါ။ , 2009) လိမ့်မည်သာဓကပင်လည်းဤအပေါင်းများဆေးထိုးပြီးနောက် paraventricular နျူကလိယသို့ တစ်ယောက်တည်းသို့မဟုတ်အတူတကွ penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေ oxytocinergic အာရုံခံ၏ activation အတွက် D3 receptors ၏နဲ့အတူ D4 receptors များအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားရမည် (Baskerville et al ကြည့်ပါ။ , 2009) ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, (စသည်တို့အတွက်ပြင်းအား၏အမိန့်ကိုအနည်းဆုံးလေး / ငါးဘို့နှစ်ခုအဲဒီ receptor Subtype ဘို့မိမိတို့ဆှဖှေဲ့အတွက်ကွဲပြားသည့်ဥပမာ) ရွေးချယ် D2 နှင့် D3 အဲဒီ receptor agonists ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်မရှိကြပေ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဤအကြောင်းပြချက်, D3 receptors ဂန္ထဝင် D2 agonists အားဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူလျှော့ချရန်အတွက်စသည်တို့စမ်းသပ်ချက်အတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာ putative D3 အဲဒီ receptor ရန်များ၏စွမ်းရည်အပေါ်အဓိကအားဖြင့်အခြေပြုထားတဲ့ဂန္ထဝင် D2 အဲဒီ receptor agonists ကသွေးဆောင် penile စိုက်ထူဖျန်ဖြေသောမကြာသေးမီအကြံပြုချက်သည် apomorphine, quinpirole နှင့် pramipexole, အစွမ်းထက်အားလုံး dopamine D2 အဲဒီ receptor Subtype (Collins et al ။ , 2009) ကိုသက်ဝင်သည့်အခြားစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူအတည်ပြုခံရဖို့သေချာပေါက်လိုအပ်နေပါသည်။ penile စိုက်ထူအပေါ် D4 အဲဒီ receptor agonists မရှိအကျိုးသက်ရောက်မှု D4 အဲဒီ receptor agonists တစ်လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသရုပ်ပြထားတဲ့အထက်တွင်ကိုးကားလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို, နှငျ့မတူဘဲသပိတ်မှောက်အတွက်, ဒီလေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်ဤအ validation ကိုလည်းလိုအပ်ပေသည်။ အမှန်စင်စစ်ပင်ရိုင်းအမျိုးအစား D4 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်တွင်တွေ့မြင်ကြောင်းမှတူညီနေတဲ့အာနိသင်နှင့်ဤတိရိစ္ဆာန်များအတွက် apomorphine တုံ့ပြန်မှု (ဖျက်ပယ်ခြင်း D4 အဲဒီ receptor ရန်များ၏စွမ်းရည်နှင့်အတူ D3 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာ penile စိုက်ထူ (နှင့်ဟ) သွေးဆောင် apomorphine များ၏စွမ်းရည်ကို Collins et al ။ , 2009) D3 အဲဒီ receptor agonist-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူအတွက် D2 အဲဒီ receptor မျိုးကွဲတစ်ခုရွေးချယ်အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ပြတ်သားသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမရပါ။ မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုဆိတ်ကွယ်ရာ, neurotransmitter / neuropeptide နှင့် / သို့မဟုတ် neurotransmitter / neuropeptide receptor မျိုးရိုးဗီဇ ablation (neurotransmitter / neuropeptide နှင့် / သို့မဟုတ် neurotransmitter / neuropeptide အဲဒီ receptor နောက်ကောက်တိရိစ္ဆာန်များ) နဲ့လေ့လာမှုများအများအားဖြင့် neurotransmitters ၏ putative လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍ၏အတည်ပြုချက်ကိုထပ်မံရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ပြဿနာများကဆက်ပြောသည်ပြီ / သို့မဟုတ် neuropeptides နှင့်၎င်းတို့၏ receptors ။ အမည်, oxytocin ဗီဇ ablation oxytocin မိတ်လိုက်နဲ့သုတ်ရည်ထိဘို့မလိုအပ်တဲ့ခဲ့လျှင်အဖြစ် oxytocin, မိတ်များနှင့်ပုံမှန် copulate ကြောင့်ကြွက်ထွက်ခေါက်ထုတ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင် homozygous အမျိုးသမီး oxytocin နောက်ကောက်ကြွက်နို့တာကတော့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုသိသိသာသာချို့ယွင်းနှင့်အတူဖြစ်သော်လည်းပုံမှန်မိတ်လိုက်နှင့် parturition ပြသ (Nishimori et al, 1996; ။ လူငယ် et al, 1996 ။ ) ။ အဆိုပါမျိုးဗီဇ encoding ကအာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ၏ ablation လည်း (Huang က et al ။ , 1993) နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase မိတ်ကြောင်းကြွက်ထွက်ခေါက်နှင့်ပုံမှန် copulate ထုတ်လုပ်သည်။ သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်များဖြစ်ကောင်း, ဆိုလိုသည်မှာအလယ်ပိုင်းနှင့်အရံအဆင့်မှာယင်း၏ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်သည့်စနစ်များ၏ redundancy မျိုးဆက်ပွားဇီဝြဖစ်စဉ်၏အရေးပါသောအင်္ဂါရပ်ဖော်ပြသည်။
ကမျိုးစိတ်များ၏ရှင်သန်မှုများအတွက်လာမည့်မျိုးဆက်မှမျိုးဗီဇ၏ကျမ်းပိုဒ်အာမခံကတည်းကဤသို့သော redundancy, ဆက်ဆက်တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မူလအစရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် D4 receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏ ablation apomorphine ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုပြောင်းလဲပစ်မထားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို, oxytocin နှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နဲ့တူ D4 receptors, erectile function ကိုထိန်းချုပ်သည့်စနစ်များအတွက်အလုပ်လုပ်နေသည့်ပြုပြီသာအနည်းငယ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထက် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုတွင်ဤ receptors မအခန်းကဏ္ဍရှိကွောငျးအကြံပြုခြင်း။ ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲများ၏အထီးကြွက်မှစနစ်တကျပေးသောအခါ, penile စိုက်ထူသွေးဆောင် D4 agonists ၏ပျက်ကွက်မကြာသေးမီကအခြားလေ့လာမှု (Depoortère et al ။ , 2009) ကသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Collins et al ၏လုပျငနျးမှမတူဘဲ။ (2009), နှင့် ပို. ပင်စဉျး penile စိုက်ထူ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသော D2 အဲဒီ receptor Subtype ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေါ်ရှိပုံလုပ်, ဒီလေ့လာမှုလည်းစနစ်တကျပေးထား putative ရွေးချယ် D3 အဲဒီ receptor ရန်အတွက် apomorphine-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူလျှော့ချရန်မတတ်နိုင်ခဲ့ကြကွောငျးဖျောပွသ [[2- (741,626-chlorophenyl) -3-hydroxypiperidin - apomorphine ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုထိခိုက်မခံတဲ့အဆိုပါရောဂါပိုးမျိုး၏အထီးကြွက်, နေစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု (နှင့်ဟ) ကိုရွေးချယ် D4 ရန် L-4 (4 အားဖြင့် antagonized ခဲ့သည် -1-yl] methyl-1H-indole), အစား D2 နှင့် D3 receptors ထက်ကြောင်း D4 receptors, အကြံပြုဖို့စာရေးဆရာများဦးဆောင်Depoortère et al (D2 agonist-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကစားသူတွေကိုဖြစ်ကြသည်။ , 2009) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေ oxytocinergic အာရုံခံအပေါ် dopamine အဲဒီ receptor agonists ၏ excitatory အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်သွယ်ဝိုက်ထက်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ချေ, ဥပမာများ၏လှုပ်ရှားမှု modulate နိုင်သည်အခြား neurotransmitters neuropeptides များ၏လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများကကမကထပြုခဲ့သို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယအတွက် oxytocinergic အာရုံခံ, လုံးဝထွက်အုပ်ချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
3.2 ။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယထဲမှာအချိုမှုအက်ဆစ်-oxytocin အပြန်အလှန်
အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယတစ်ဦး neurotransmitter (ဥပမာအချိုမှုအက်ဆစ်နှင့် aspartic အက်ဆစ်အဖြစ် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်ပါဝင်တဲ့ synapses အတွက်အလွန်ကြွယ်ဝ) (ဗန် Den Pol, 1991) ။ ဒီနျူကလိယအတွက် Excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပါအဝင်မြောက်မြားစွာ functions များ, တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် (။ Roeling et al, 1991; ။ Melis et al, 1994b, 2000, 2004b) ။ ထို့ကြောင့် N-methyl-D-aspartic အက်ဆစ် (NMDA), အ NMDA အဲဒီ receptor မျိုးကွဲတစ်ခုရွေးချယ် agonist, ဒါပေမယ့်မရ (±) -_- အမိုင်နို-3-hydroxy-5-methyl-isoxazole-4-propionic အက်ဆစ် (AMPA) ယင်းသို့ထိုးသွင်းသောအခါ, AMPA အဲဒီ receptor မျိုးကွဲသို့မဟုတ် (±) -trans (1) -amino-1,3-cyclopentane dicarboxilic အက်ဆစ် (ACPD) ၏ရွေးချယ် agonist, အ metabotropic အဲဒီ receptor မျိုးကွဲတစ်ခုရွေးချယ် agonist, penile စိုက်ထူ inducing နိုင်စွမ်းရှာတွေ့ခဲ့သည် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက် (Melis et al ။ , 1994b) ၏ paraventricular နျူကလိယ။ 948 MR Melis ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှု, အေ Argiolas / အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် Biobehavioral 35 (2011) 939-955 NMDA (+) MK-801, non-ယှဉ်ပြိုင် NMDA အဲဒီ receptor ရန် (Woodruff et al ။ , 1987 နေဖြင့်တားဆီးခဲ့သည် Reviews ), Melis et al (ထို paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း။ , 1994b) ။ နိုးသို့မဟုတ် anaesthetized အထီးကြွက် (Zahran et အတွက်တိုးပွားလာ intracavernosal ဖိအားအတွက် paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းသည့်အခါဤအရလဒ်များကိုနှင့်အညီ, intracavernous ဖိအားစောင့်ကြည့်ရည်ရွယ်ပေးပို့စနစ်များလေ့လာမှုများအတွက် NMDA ပိုပြီးတက်ကြွအခြား excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်အဲဒီ receptor Subtype ၏ agonists ထက်ရှာတွေ့ခဲ့သည် ။ အယ်လ်, 2000; Chen နှင့် Chang, 2003) ။
oxytocin နှင့် dopamine များအတွက်အထက်တွင်အကြံပြုအဖြစ် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယအတွက် oxytocinergic ဆဲလ်အသေကောင်အပေါ် impinge ကတည်းကက penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေ NMDA receptors oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်တွင်တည်ရှိနေကြသည်ဖွယ်ရှိသည် (ဗန် Den Pol, 1991) ။ dopamine အဲဒီ receptor agonists နှင့်အတူတွေ့ရှိရအရာကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်မှာတော့ NMDA ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံ icv ပေးသော oxytocin ရန်ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းခံရ, oxytocinergic neurotransmission ၏ activation ကကမကထပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် မ paraventricular နျူကလိယသို့ (Argiolas နှင့်တကွ Melis, 1995, 2004, 2005 နှင့်ကိုးကားကြည့်ပါ) ။ NMDA-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase inhibitors (N-Nitro-N-methyl-မိုင်နိုအက်စစ် methyl Ester နှင့် n- နေဖြင့်တားဆီးနေသည်ကတည်းကအလားတူပင် oxytocinergic neurotransmission ၏ NMDA-သွေးဆောင် activation လည်းနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ၏ activation မှအလယ်တန်းဖြစ်ပါသည် methyl-thio-ဌ-citrulline) ကို paraventricular နျူကလိယသို့ငါအပ်သနှင့် NMDA penile စိုက်ထူသွေးဆောင်ကြောင်းဆေးများမှာ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းခြင်း, hypothalamic နျူကလိယထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးပွါး (Argiolas နှင့် Melis, 1995, 2004, 2005 နှင့်ကိုးကားကြည့်ရှုမြို့သား ) ။ အတော်ကြာအာရုံကြောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှာပြထားတဲ့အတိုင်း dopamine အဲဒီ receptor agonists သည်နိုက်ထရစ် oxidesynthase ၏ NMDA သွေးဆောင် activation ပြန်လည်သုံးသပ် Snyder,2တွေ့မြင်ဘို့ (ထို Ca2 + ရုပ်သံလိုင်း-coupled NMDA receptors မှတဆင့် oxytocinergic ဆဲလ်အသေကောင်တစ်ဦးတိုးလာ Ca1992 + ဝင်လာဖို့လည်းအလယ်တန်းဖြစ်နိုင်သည်; Southam နှင့် Garthwaite, 1993; Schuman နှင့် Madison, 1994 နှင့်ကိုးကားမြို့သား) ။ အလှည့်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် (အထကျကိုကြည့်ပါ) oxytocinergic neurotransmission မြှင့်လုပ်ဆောင်။ penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေ paraventricular oxytocinergic အာရုံခံကိုသက်ဝင်သည်ဟု glutamatergic စီမံကိန်း၏မူလအစအချို့ neuroanatomical နှင့် electrophysiological သက်သေအထောက်အထားပေမယ့်, မသိသည်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ, hippocampus, သူတို့သည်အစပြုစေခြင်းငှါအကြံပြု (Saphier နှင့် Feldman, 1987; ။ Chen က et al, 1992) ။ နောက်ထပ်အလုပ် paraventricular နျူကလိယဖို့ glutamatergic ပရိုဂျက်၏မူလအစပိုကောင်းသွင်ပြင်လက္ခဏာများရန်လိုအပ်သောဖြစ်သော်လည်း penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် paraventricular နျူကလိယထဲမှာအချိုမှုအက်ဆစ်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုရှင်းလင်းစွာ microdialysis လေ့လာမှုများကထောက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်အချိုမှုအက်ဆစ်နှင့် aspartic အက်ဆစ်၏အပို-ဆယ်လူလာပြင်းအားတပိုင်တနိုင်အီစထိုဂျင် + ချို့ယွင်းသော-ရစေတယ်လက်ခံအမျိုးသမီးကြွက် (Melis et al ၏ရှေ့တော်၌ထားသောအခါအ noncontact စိုက်ထူဖေါ်ပြခြင်းအထီးကြွက်များ၏ paraventricular နျူကလိယထံမှရရှိသော dialysate အတွက်တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ , ထို့အပြင်ဗဟို oxytocinergic ဂီယာ (Melis et al ။ , 2004a ၏ activation ကကမကထပြုခဲ့ကြသည် 1999b), penile စိုက်ထူ, ခ) ။ အဆိုပါလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူသုတ်ရည်ထိ (Melis et al ။ , 2004a) ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အခါထိုကဲ့သို့သောတိုးကိုတောင်ပိုမိုမြင့်မားတွေ့ရှိခဲ့သည်။ excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်တစ်ခုတိုးချဲ့လှုပ်ရှားမှု (ရသောကာလအတွင်း copula အတွက် penile စိုက်ထူပေါ်ပေါက်), penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိစဉ်အတွင်း paraventricular နျူကလိယအတွက် noncontact စိုက်ထူခြင်းနှင့် copulatory အပြုအမူနှစ်မျိုးလုံးဖြစ်ပေါ်သည့် paraventricular နျူကလိယအတွက် NMDA receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်လျှော့ချသောအယူအဆနှင့်အညီ , ဤလျော့ချရေး, ဤဇီဝကမ္မအခင်းအကျင်း၌ဤ hypothalamic နျူကလိယထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတို့၏စီးပွါးအတွက်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်ကို (Melis et al ။ , 2000) ။ oxytocinergic ဆဲလ်အသေကောင်မှ juxtaposed excitatory အမိုင်နို acidergic synapses အပေါ် impinging GABAergic အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်နေယုတ်လျော့ဂါဘမြို့သားဖြန့်ချိဖို့အလယ်တန်း extracellular အချိုမှုအက်ဆစ်အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးလည်း, ထို CB1 ရန် SR 1A အားဖြင့် cannabinoid CB141761 receptors တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးနောက် paraventricular နျူကလိယ၌တွေ့ (။ ။ Castelli et al, 2006 Succu et al ကြည့်မြင် 2007) ကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricles သို့ငါအပ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက် penile စိုက်ထူသွေးဆောင်ကြောင်းဆေးများမှာ paraventricular နျူကလိယသို့။ ထိုသို့သောတိုးနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်, oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ၏ activation မှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အလှည့်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေ oxytocinergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဒါကြောင့်များ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်တားဆီးနေစဉ်ထိုကဲ့သို့သောယန္တရားနှင့်အညီ, SR 141761A သွေးဆောင် penile စိုက်ထူ, NMDA receptors တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်၎င်း, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase inhibitors အသုံးပြုပုံပေမယ့်မ paraventricular နျူကလိယအတွက် dopamine သို့မဟုတ် oxytocin receptors တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်လျှော့ချခဲ့သည် oxytocin အဲဒီ receptor ရန်အားဖြင့်ဗဟို oxytocin receptors icv ပေးထား
3.3 ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ oxytocin-dopamine အပြန်အလှန်
တစ်ဦးထိုး-မှီခိုထုံးစံအတွက် ventral tegmental ဧရိယာ၏ caudal တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ oxytocin penile စိုက်ထူ induces (Melis et al ။ , 2007) ။ အမြင့်ဆုံးထိုးစမ်းသပ်ပြီးစဉ်တဖက်သတ်ထိုးသွင်းနိမ့်ဆုံးတက်ကြွထိုး, 20 ng ခဲ့ 100 ng ဖြစ်ခဲ့သည်။ လိင်တုံ့ပြန်မှု caudal ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းရှိ oxytocin ရန်ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin ၏ကြိုတင်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ဖျက်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်အဖြစ် oxytocin အကျိုးသက်ရောက်မှု, oxytocinergic receptors ၏ activation ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား receptors ရာစီမံကိန်းကိုအဓိကနျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုရန် dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် (1) နှစ်ဆ immuno-fluorescent လေ့လာမှုများ caudal ventral tegmental ဧရိယာ oxytocinergic အမျှင်အတွက် dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်နှင့်အတူအနီးကပ်ထိတွေ့အတွက်အရာများ၏အများစုအပြုသဘော tyrosine-hydroxylase အဘို့အလို့တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ယခင်က retrograde tracer Fluorogold င်ခဲ့ကြသည်ဖြစ်ကြောင်းပြသ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ shell ကိုသို့ထိုးသွင်း (Melis et al ။ , 2007) နှင့် (2) ventral tegmental ဧရိယာ oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူ၏ shell ကိုထံမှရရှိသော dialysate အတွက်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးနှင့်အတူ concomitantly ဖြစ်ပေါ် နျူကလီးယပ် accumbens (Melis et al ။ , 2007) ။ oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူလည်းနှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်မှုမသာဃအားဖြင့် (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin antagonized နှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase inhibitor S- အားဖြင့်ဖြစ်ခြင်းသည် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးနှင့်အတူ concomitantly ဖြစ်ပေါ် methyl-thio-ဌ-citrulline, ဒါပေမယ့်လည်း _-conotoxin တစ်ဗို့-မှီခို Ca2 + လိုင်းများ blocker နှင့် ODQ ([1-တစ်ဦး] quinoxalin-1,2,4-One oxadiazole 4,3H- ), guanylate ၏ inhibitor တစ်အစွမ်းထက်ခြင်းဖြင့်အားဖြင့် cyclase, oxytocin ရှေ့တော်၌ထို caudal ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာပေးထားတဲ့အားလုံး (Succu et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါ Fluorogold ၏အဖြစ်လူများစွာ caudal ventral tegmental ဧရိယာ၌ tyrosine hydroxylase များအတွက်အပြုသဘောဖြစ်တွေ့ရှိ oxytocinergic အမျှင်များကဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ dopaminergic ဆဲလ်အသေကောင်, တံဆိပ်ကပ်လည်းအပြုသဘော (Succu et al ။ , 2008) နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase နှင့် guanylate cyclase အဘို့အလို့တံဆိပ်ကပ်ခဲ့သည်, oxytocin -induced penile စိုက်ထူအောက်ပါယန္တရားကကမကထပြုခဲ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ peptide အားဖြင့် dopaminergic ဆဲလ်အသေကောင်အတွက် oxytocinergic receptors ၏ activation dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွင်းပိုင်း Ca2 + ရောက်လာတိုးပွားစေပါသည်။ ဤသည်အားဖြင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase တစ် Ca2 + -calmodulin-မှီခိုအင်ဇိုင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်။ အလှည့်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်သိသိ GMP တစ်ခုတိုးလာအာရုံစူးစိုက်မှုမှအဓိကဦးဆောင်, guanylate cyclase မြှင့်လုပ်ဆောင်။ သိသိ GMP နျူကလီးယပ် accumbens မှထုတ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်။ အဆိုပါ caudal ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်း oxytocin အားဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူအတွက်သိသိ GMP ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ penile စိုက်ထူသွေးဆောင်ရန်, 8-bromo-သိသိ GMP, သိသိ GMP တစ်ခုတက်ကြွ phosphodiesterase-ခံနိုင်ရည် analogue များ၏စွမ်းရည်ကိုကထောက်ခံနေသည် caudal ventral tegmental ဧရိယာနှင့်နျူကလိယ accumbens ထံမှ dialysate အတွက်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine တိုးမြှင့်ဖို့ (Succu et al, 2008; ။ Melis et al, 2009a ။ ) ။ ဤသည်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်သည်ဤနျူကလိယ (Melis နှင့် Argiolas, 8b) (ပုံထဲမှာထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ penile စိုက်ထူသွေးဆောင်နိုင်ခြင်း 1995-bromo-သိသိ GMP ဖြစ်ခြင်း, အ paraventricular နျူကလိယအတွက် oxytocinergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသောအားဖြင့်ယန္တရားနှင့်အတူကှဲလှဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ 2) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine အားဖြင့် activated ဟာအာရုံကြောလမ်းကြောင်းမှ penile စိုက်ထူရန်ဦးဆောင် accumbens အဖြစ်ဤနေဆဲမသိရှိပါ။ သို့သော်မရရှိနိုင်ပါဒေတာသည်ဤလမ်းကြောင်းဟာ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် dopamine neurotransmission ကိုသက်ဝင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူထဲမှာသာအပို-ဆယ်လူလာ dopamine တစ်ခုတိုးဖို့ concomitantly ဖြစ်ပေါ် နျူကလိယ accumbens, ဒါပေမယ့်လည်း paraventricular နျူကလိယ၌၎င်း, paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းသည့် dopamine အဲဒီ receptor ရန် haloperidol အားဖြင့် antagonized ဖြစ်ပါတယ် (Melis et al ။ , 2007) ။ တစ်ဦးကအတူတူကိုယ်, ဤရလာဒ်များဖြင့်တစ်ဦး NO-သိသိ GMP အချက်ပြစနစ်ကသက်ဝင်, ဒီဧရိယာထဲမှာဖြန့်ချိ oxytocin activated သည့်အခါ oxytocinergic အာရုံခံအဆိုပါ paraventricular နျူကလိယထဲမှနှင့် caudal ventral tegmental ဧရိယာမှထုတ်လုပ်တဲ့သောစိတ်ကူး, ထောကျပံ့, အလှည့်အတွက် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသော (Melis et al, 2007, 2009a; ။ ။ Succu et al, 2008) ။ အလှည့်အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ဖြန့်ချိ Dopamine penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေဟာကျောရိုးမှထုတ်လုပ်တဲ့ paraventricular oxytocinergic အာရုံခံလှုံ့ဆော်ပေးသော incerto-hypothalamic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation မှဦးဆောင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်း paraventricular နျူကလိယထဲမှာဖြန့်ချိ dopamine ထိုကဲ့သို့သော ventral tegmental ဧရိယာအဖြစ်အပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများ, အ hippocampus, အ amygdala နှင့်ဖြစ်ကောင်းသည်အခြားဦးနှောက်ဒေသများသို့ထုတ်လုပ်တဲ့ oxytocinergic အာရုံခံကိုလည်းသက်ဝင်စေပါလိမ့်မယ်။
ဒီယူဆချက်နှင့်အညီ, အထက်ပြန်ပြောပြအဖြစ်, penile စိုက်ထူ induces တစ်ခုထိုးမှာ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း apomorphine ကိုလည်းနျူကလိယ accumbens အတွက်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု, အ oxytocin အဲဒီ receptor ရန်ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကိုလျှော့ချကာအကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးပွါး ။ ) 2-Orn8-vasotocin အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (Succu et al, 2007 သို့ထိုးသွင်း; Melis et al, 2009a) ။ ။ အတူတူ, အထက်ပါအာရုံကြောလမ်းကြောင်း dopamine, oxytocin နှင့်အခြားအ neurotransmitters ပတျသကျတဲ့မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့အာရုံကြော circuitry ဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါ, (ဥပမာအချိုမှုအက်ဆစ်အောက်တွင်ကြည့်ပါ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်, ဒါပေမယ့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုးမသာလွှမ်းမိုး (ပုဒ်မ4ကြည့်ပါ) ။
3.4 ။ အဆိုပါ hippocampus ၏ ventral subiculum အတွက် oxytocin-အချိုမှုအက်ဆစ်အပြန်အလှန်
oxytocin တစ်ထိုးမှီခိုထုံးစံ (Melis et al ။ , 2009b) ထဲမှာ, dorsal subiculum အတွက် ventral သို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ penile စိုက်ထူ induces, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု (အထကျကိုကြည့်ပါ) ကိုအခြားဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်တွေ့ရှိရအဖြစ် oxytocin ၏တူညီသော site ကိုသို့ငါအပ်သဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin ၏ကြိုတင်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ဖျက်သိမ်းခံရ, oxytocin receptors ၏ဆွကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ ဤအ receptors များ၏ဒေသခံမှသကဲ့သို့, ရရှိနိုင်သည့်ဒေတာသူတို့နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ကြွယ်ဝအာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီသည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် microdialysis လေ့လာမှုများ oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူသည့် ventral subiculum အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးနှင့်အတူ concomitantly ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုပြသ, ဤတိုးမပေးသာနိုက်ထရစ် oxidesynthase inhibitor က S-methyl-thio-ဌ-citrulline ၏ကြိုတင်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ဖျက်သိမ်းနေသည် နှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် scavenger ဟေမိုဂလိုဘင်အသုံးပြုပုံဒါပေမယ့်လည်းဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin အသုံးပြုပုံအားလုံး penile စိုက်ထူ (Melis et al ။ , 2010) ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကြောင်းဆေးများမှာ oxytocin ၏တူညီသော site ကိုသို့ငါအပ်။ ပို. အရေးကြီးသည်မှာ oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဆိုပါသို့ငါအပ်သ non-ယှဉ်ပြိုင် NMDA အဲဒီ receptor ရန် (+) MK-801 အားဖြင့် antagonized သော ventral subiculum အတွက်အပို-ဆယ်လူလာအချိုမှုအက်ဆစ်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးနှင့်အတူ concomitantly ကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် ventral subiculum (Melis et al ။ , 2010) ။ အတူတကွဤရလဒ်များကိုအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်တစ်ခု intercellular တမန်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်အသုံးပြုပုံဖြစ်နိုင်သည် ventral ကနေအာရုံကြော efferent စီမံချက်များမှတဆင့် penile စိုက်ထူဖို့ဦးဆောင်အချိုမှုအက်ဆစ် neurotransmission မြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းအကြံပြု အပို-hippocampal ဦးနှောက်ဒေသများသို့ subiculum ။ ဒီယူဆချက်နှင့်အညီ, အဆိုပါ ventral subiculum သို့ထိုးသွင်း NMDA တစ်ထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌ penile စိုက်ထူ induces, ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု (+) ၏တူညီသော site ကိုထဲသို့ကြိုတင်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်လုံးဝ antagonized ဖြစ်ပါတယ် MK-801, ဒါပေမယ့်မရက S-methyl-thio-ဌ-citrulline အားဖြင့် , ဟေမိုဂလိုဘင်သို့မဟုတ်ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin (Melis et al ။ , 2010) ။ အဆိုပါ ventral subiculum အတွက် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် (ဆိုလိုသည်မှာအချိုမှုအက်ဆစ်) က activated အပို-hippocampal ဦးနှောက်ဒေသများသို့ထုတ်လုပ်တဲ့ယင်းအာရုံကြော efferent လမ်းကြောင်းမှကြောင့် hippocampal efferent စီမံကိန်း၏အများစုဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ဤ glutamatergic ဖြစ်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်, ဤစီမံချက်များ oxytocinergic အာရုံခံ၏ activation မှဦးဆောင်အလှည့်အတွက် paraventricular နျူကလိယအတွက် incerto-hypothalamic dopaminergic အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှု modulate ရာ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှု modulate သာအကြံပြုစေခြင်းငှါ ရှိပြီးသားဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေ (အထကျကိုကြည့်ပါ) ။
ထို့ကြောင့် penile ventral subiculum oxytocin အားဖြင့်သွေးဆောင်စိုက်ထူသည့်နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုအတွက်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုး, ဤတိုးနှင့်အတူ concomitantly ဖြစ်ပေါ်, penile စိုက်ထူကဲ့သို့ 2- ဃ (CH5) 2Tyr (ငါ့ကို) ကဖျက်သိမ်းနေသည် (Melis et al ။ , 8b) မတိုင်မီ oxytocin အဆိုပါ ventral subiculum သို့ငါအပ်သ Orn2009-vasotocin ။ ထိုမှတပါး, ventral subiculum oxytocin သွေးဆောင် penile စိုက်ထူလည်း (+) ကလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက MK-801 (။ Melis et al 2009b) ဒါပေမယ့်မနျူကလိယ accumbens သို့, ထို ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်းခြင်းနှင့်အပို-ဆယ်လူလာတစ်ခုတိုးဖို့ concomitantly ဖြစ်ပေါ် အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌, ဒါပေမယ့်မနျူကလိယ accumbens အတွက်အချိုမှုအက်ဆစ်, (ပုံ။2ကိုကြည့်ပါ) ဃ (CH5) မတိုင်မီ oxytocin အဆိုပါ ventral subiculum သို့ထိုးသွင်း 8Tyr (ငါ့ကို) -Orn3-vasotocin ကြောင့်ဖျက်သိမ်းနှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခြင်း, က mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏တက်ကြွစွာ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာတစ်ခုတိုးလာ glutamatergic neurotransmission မှအလယ်တန်းကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။ ဤသည် penile စိုက်ထူထိန်းချုပ်ထားတဲ့အချိုမှုအက်ဆစ်-dopamine အပြန်အလှန်အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌တည်ရှိကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများ (Melis et al ကြည့်ပါ။ , မြို့သား 2009b နှင့်ကိုးကား) ကို prefrontal cortex သို့မဟုတ်အခြားဦးနှောက်ဧရိယာများမှတဆင့်, ဆိုလိုသည်မှာတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ဖြစ်ကြ၏ ventral tegmental ဧရိယာဖို့ subiculum ထံမှလိုလားသူ erectile efferent glutametergic လမ်းကြောင်းဟုတ်မဟုတ်သိရှိနိုင်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း။ (အထက်နှင့် Saphier နှင့် Feldman, 1987 ကြည့်ပါ) paraventricular နျူကလိယလည်း hippocampus ထံမှ glutamatergic စီမံချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံကတည်းက နှင့် အချိုမှုအက်ဆစ်ဟာ ventral tegmental ဧရိယာမှထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုအပါအဝင် paraventricular oxytocinergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင် (မြို့သား Argiolas နှင့် Melis, 2005 နှင့်ကိုးကားကြည့်ပါ) နှင့် အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ oxytocin penile စိုက်ထူ induces နှင့် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံဆဲလျ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးပွါးs ကို (အထကျကိုကြည့်ပါ) ဒါကြောင့်ကြောင်း p မှနျးဖို့သွေးဆောင်araventricular oxytocinergic အာရုံခံလည်းအနည်းဆုံးအားတစ်စိတ်တစ်ဒေသထဲမှာ, ventral subiculum သို့ထိုးသွင်း oxytocin အားဖြင့် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ (ပုဒ်မ4ကြည့်ပါ) ။
အဆိုပါလေ့လာမှုများ Confirm အထက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်အထီးကြွက် oxytocin အဆိုပါ hypothalamus နှင့်ကျောရိုး၏ paraventricular နျူကလိယ၏အဆင့်မှာ penile စိုက်ထူ၏ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းအစောပိုင်းတွေ့ရှိချက်ကိုတိုးချဲ့ပါ။ အထူးသဖြင့်, အရှိဆုံးပြန်လည်ရာခိုင်နှုန်းလေ့လာမှုများကအခြားဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်သရုပ်ဆောင်, ဆိုလိုသည်မှာယင်း ventral tegmental ဧရိယာသည် ventral subiculum, နှင့် amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယအားဖြင့်လည်း oxytocin လွှမ်းမိုးမှု penile စိုက်ထူပြသ.
အဆိုပါ paraventricular အဆင့်တွင်အရေးကြီးဆုံးအသစ်သောတွေ့ရှိချက်ကတော့ paraventricular နျူကလိယအတွက် oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက် (နှင့် supraoptic နျူကလိယထဲမှာဖြစ်ကောင်း D2 မိသားစု (D2, D3 နှင့် D4) ၏အားလုံး dopamine receptors ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်နှင့် အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ) (Baskerville နှင့်ဒေါက်ဂလပ်, 2008; Baskerville et al, 2009) ။ ။ ဤသည်အားကြီးသော neuroanatomical ထောက်ပံ့ dopamine နဲ့ dopamine အဲဒီ receptor agonists erectile function ကိုပါဝင်ပတ်သက်တိုက်ရိုက် oxytocinergic အာရုံခံကိုသက်ဝင်နှင့်ကျောရိုးဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းအပို-hypothalamic ဦးနှောက်ဧရိယာများသာမဟုတ်ဘဲထုတ်လုပ်တဲ့စေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆမှပံ့ပိုးကူညီမှု။ ဤကိစ်စတှငျက intracavernous ဖိအား dopamine အဲဒီ receptor agonist-သွေးဆောင်တိုးအဆိုပါ lumbo-sacral ကျောရိုးထဲမှာ oxytocinergic receptors တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်လျှော့ချကြောင်းကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိအရေးကြီးပါတယ် (Baskerville et al ။ , 2009) ။ ထိုကဲ့သို့သောသက်သေအထောက်အထား anaesthetized အထီးကြွက်များတွင်ခွင့်ရရှိထားသည်ဟုသိရသည်ပေမယ့်အမှန်စင်စစ်ယင်းတွေ့ရှိချက် dopamine အဲဒီ receptor agonist-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ paraventriculo-ကျောရိုး oxytocinergic ဆင်းလမ်းကြောင်း၏ activation အတည်ပြု။ H ကိုowever ပြုလုပ်နေဆဲ oxytocinergic ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်ပစ္စုပ္ပန် dopamine receptors ၏ဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူသည့် D2 မိသားစု (D2, D3 သို့မဟုတ် D4) ၏တိကျသော dopamine အဲဒီ receptor မျိုးကွဲများ၏ activation မှအလယ်တန်းရှိမရှိစေ့စေ့မေးမြန်းပြီးခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ် သို့မဟုတ်ဤအဲဒီ receptor Subtype penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်ထားတဲ့အတွက်အခြေအနေတွင်ပေါ် မူတည်. ဖြစ်နိုင်ခြေကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာ, erectile တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲပစ်အတွက် Co-operate လျှင် (Moreland et al ကြည့်မြင် 2004; ။ Enguehard-Gueiffier et al, 2006; ။ Melis et al ။ 2006a, ခ; Löber et al, 2009; ။ Collins et al, 2009; ။ Depoortère et al, 2009; ။ Baskerville et al, 2009) ။ ။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အသစ်သောတွေ့ရှိချက်ကတော့ paraventricular နျူကလိယဒါမှမဟုတ် hippocampus ၏ CA1 လယ်သို့, ဒါပေမယ့်လည်း ventral tegmental ဧရိယာသည် ventral subiculum, နှင့် amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယသို့သာထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ oxytocin penile စိုက်ထူ induces သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤရွေ့ကားဦးနှောက်ဒေသများသူတို့ paraventricular နျူကလိယမှအ lumbo-sacral ကျောရိုး oxytocinergic ပရိုဂျက်များကဲ့သို့ခံယူသော်လည်း oxytocin, အထီးကြွက်များတွင်အလိုအလျောက် penile စိုက်ထူဖြစ်စဉ်များတိုးပွားလာကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းအစောပိုင်းလေ့လာမှုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးမခံခဲ့ရပါ။ oxytocin အမှန်ပင်ထိုကဲ့သို့သောလက်လှမ်းသို့မဟုတ်လက်လှမ်းမမှီလက်ခံ (အီစထိုဂျင်-အဓိကချို့ယွင်း Prime) ၏ရှေ့တော်မှောက်ကနေအစပြုပေးသောသူတို့အားအဖြစ်မဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏မရှိခြင်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ရသောအလိုအလျောက် penile စိုက်ထူဖြစ်စဉ်များ, တိုးပွားလာနိုင်စွမ်းရှာတွေ့ခဲ့သည် ovariectomized အမျိုးသမီးကြွက်သို့မဟုတ် အဆိုပါမအင်္ဂါ၏ခြယ်လှယ်သည်, dorsal subiculum အတွက် Melis et ဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum, အ caudate နျူကလိယက, medial preoptic ဧရိယာသည် ventromedial နျူကလိယနှင့် supraoptic နျူကလိယ (အယ်လ်ဟာ paraventricular နျူကလိယနှင့် hippocampus ၏ CA1 လယ်သို့ wheninjected, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ , 1986) ။ လိင်တံတစ်ဦးကဗီဒီယိုကင်မရာကိုယန္တရားနဲ့ဗီဒီယိုတိတ်ခွေအပေါ်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စမ်းသပ်မှုစောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုသို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကာလအတွင်းတိုက်ရိုက်ပေးထားသောကုသမှု၏သတိမထားမိခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးလေ့လာသူအားဖြင့် penile အိမ်မှထံမှထွက်ပေါ်လာသည့်အခါဤအရာအလုံးစုံလေ့လာမှုများအတွက် penile စိုက်ထူများသောအားဖြင့်ရေတွက်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို penile စိုက်ထူဇာတ်လမ်းတွဲ 0.5-1 မိဘို့ကြာရှည်ခံခြင်းနှင့်များသောအားဖြင့် penile ဖြီးလိမ်းပုံနှင့် / သို့မဟုတ်တင်ပါးဆုံရိုး flexions ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ အဘယ်သူမျှမစမ်းသပ်ချက်အများအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်ဤကြွက်မတူညီသောဦးနှောက်ဒေသများသို့ထိုးသွင်း oxytocin ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုမှအနိမ့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောန၌ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်လျှင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသိရှိနိုင်ရန်ဤကြွက်၌ပြစ်မှားမိသည်။ ဤသည် dopamine agonists, excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်, ACTH-MSH, hexarelin နှင့် VGF peptides အပါအဝင်အလိုအလျောက် penile စိုက်ထူဖြစ်စဉ်များ, တိုးမြှင့်သောအခြား neuropeptides နှင့်မူးယစ်ဆေးလိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်လေ့လာချက်များ၏အများစုလည်းသက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ဤဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏လိုလားသူ erectile အကျိုးသက်ရောက်မှုထပ်တလဲလဲစနစ်, intracerebroventricularly သို့မဟုတ်, ဆိုလိုသည်မှာ, ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းများကကောက်ကာငင်ကာသို့မဟုတ်ဤဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း intracavernous ဖိအားအတွက်တိုးခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူ၏ဖြစ်ပျက်မှုဆုံးဖြတ်ရန်ထားတဲ့ပေးပို့စနစ်များနည်းလမ်းများ, ကအတည်ပြုခဲ့ပြီး တိုက်ရိုက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်အရေးပါသို့တစ်ဖိအား microtransducer ၏ implants ပြီးနောက်တိုက်ရိုက်လိုဏ်ဂူ corpora သို့ (ဘာ et al ကြည့်ပါ။ , 1999) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာ, ventral subiculum နှင့် amygdala ၏ posteromedial နျူကလိယလည်း oxytocin oxytocinergic receptors အပေါ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤသည် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံအဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှနှင့်နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုမှထုတ်လုပ်တဲ့၏ activation စေပါတယ်, နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုထံမှရရှိသော dialysate နှင့်ထဲမှာ dopaminergic receptors တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးနောက်တွေ့ရှိရသည်ဤအပို-hypothalamic ဒေသများသို့ထိုးသွင်းသည့် peptide အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ erectile တုံ့ပြန်မှုအတွက်လျော့ချရေးဖြင့်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်တိုးမြှင့်ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် နျူကလိယ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) accumbens ။ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation ရန်နှင့် penile စိုက်ထူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောထိုဦးနှောက်ဧရိယာများတွင် oxytocinergic receptors ၏ဆွခြင်းဖြင့် activated သည့်ယန္တရားများ, သကဲ့သို့ရှင်းလင်းအကောင်းဆုံး caudal ventral tegmental ဧရိယာ၌ဖြစ်ပေါ်ရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ အမှန်မှာကဒီမှာ pharmacological နှင့် immuno-fluorescent ရလဒ်များကို oxytocin အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင် (။ ။ Succu et al, 2007 Melis et al, 2009, 2008a) ကနျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုမှထုတ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အပေါ် impinge ဖော်ပြသည်။ ဤအအာရုံခံအတော်များများဟာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase နှင့် guanylate cyclase ကြွယ်ဝဖြစ်ကြသည်။ ဤအ dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက် oxytocinergic receptors ၏ဆွတစ်ခုတိုးလာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုကိုဦးဆောင်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ၏ activation ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလှည့်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်, အားဖြင့်သိသိ GMP များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်, guanylate cyclase မြှင့်လုပ်ဆောင် သောနျူကလိယမှအ dialysate အတွက်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine အတွက်တိုးဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်နှောက် microdialysis (Succu et al ဖြင့်ရရှိသော accumbens, mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine များလွှတ်ပေးရန်စေပါတယ်။ , 2008 ) ။ အလှည့်အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ဖြန့်ချိ Dopamine penile စိုက်ထူရန်ဦးဆောင်အာရုံကြောလမ်းကြောင်းမြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဤသည် dopamine အဲဒီ receptor များ၏စွမ်းရည်ကို haloperidol antagonists နှင့် / သို့မဟုတ်နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း CIS-flupentixol ventral tegmental ဧရိယာ oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူ (Succu et al ။ , 2008) လျှော့ချရန် accumbens ကထောက်ခံသည်။ လိုလားသူ erectile လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာ incerto-hypothalamic dopaminergic အာရုံခံ, paraventricular oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်မှပရောဂျက်ကြောင်းအထူးသဖြင့်သူများကိုသက်ဝင်ပုံရသည်။ အမှန်စင်စစ် oxytocin အဆိုပါ caudal ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်းသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ဒါပေမယ့်လည်း paraventricular နျူကလိယထဲမှာမသာ extracellular dopamine တိုးပွါး, ထို paraventricular နျူကလိယအတွက် dopamine receptors တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ Succu et al (သိသိသာသာ ventral tegmental ဧရိယာ oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူလျော့နည်းစေသည်။ , 2007, 2008; ။ Melis et al, 2007, 2009a) ။ ဤအနျူကလိယ၏တည်ရှိမှု dopamine-paraventricular dopamine-paraventricular oxytocin-ventral tegmental ဧရိယာ oxytocin-dopamine လင့်များ accumbens ထို့အပြင် apomorphine တစ်လိုလားသူ erectile ထိုးများ၏စွမ်းရည်အားဖြင့်နှင့် D4 အဲဒီ receptor agonist PD 168077 ၏အကြံပြုသည်နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုအတွက်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine တိုးမြှင့်ဖို့ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း (Succu et al ။ , 2007), တုန့်ပြန် သော ventral tegmental ဧရိယာသို့ငါအပ်သဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) -Orn8-vasotocin အားဖြင့်ဖျက်သိမ်းနေသည် (Melis et al ။ , 2009a လည်းအောက်တွင်ကြည့်ပါ) ။ သို့သော်နောက်ထပ်အလုပ် incerto-hypothalamic dopaminergic စနစ်အဖို့နျူကလိယ accumbens ချိတ်ဆက်သောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
oxytocin penile စိုက်ထူ induces နှင့် ventral subiculum သို့ဒါမှမဟုတ် amygdala ၏ posteromedial နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသောအားဖြင့်ယန္တရားသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယခုအချိန်တွင်နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ဤဒေသများအတွက်ကိုလည်း oxytocin အားဖြင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ၏ activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးသော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် receptors မြှင့်လုပ်ဆောင်။ အလှည့်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ပုံ ventral tegmental ဧရိယာ၌ glutamatergic neurotransmission တိုးမြှင့်သည့်အမည်မသိ efferent Project, မြှင့်လုပ်ဆောင်။ အချိုမှုအက်ဆစ်ထို့နောက် penile စိုက်ထူရန်ဦးဆောင် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံလှုံ့ဆော်။ ဤသည်အယူအဆဟာ ventral tegmental ဧရိယာ (ပုံထဲမှာအပို-ဆယ်လူလာအချိုမှုအက်ဆစ်တိုးမြှင့်ဖို့ ventral subiculum သို့ထိုးသွင်း oxytocin များ၏စွမ်းရည်များကအဓိကအားဖြင့်ထောက်ခံသည်။ 3), နှင့် non-ယှဉ်ပြိုင် NMDA အဲဒီ receptor ရန် (+) ကို MK-801 oxytocin အားဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူလျှော့ချရန်, ဒါပေမယ့်မနျူကလိယ accumbens ထဲမှာ, ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်းသည့် ventral subiculum သို့ဒါမှမဟုတ် posteromedial နျူကလိယသို့ဖြစ်စေထိုးသွင်း အဆိုပါ amygdala (Melis et al ။ , 2009b) ၏။ ယခုအချိန်တွင်ပိုမိုအသေးစိတ် ventral subiculum oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤတွင် oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ပါဝင်သောအာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်တွင်တည်ရှိ oxytocinergic receptors ၏ activation မှအလယ်တန်းပုံရသည်။ ဤ (; Southam နှင့် Garthwaite, 1992; Schuman နှင့် Madison, 1993 Snyder, 2004 ကိုကြည့်ပါ) နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏ထုတ်လုပ်မှုတိုးဖြစ်ပေါ်စေသည်, ရေရှည်အလားအလာများအတွက်ဖော်ပြထားကြောင်းဆင်တူတဲ့ယန္တရားတစ်ခု intercellular တမန်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် glutamatergic neurotransmission မြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသော ။ ဒီအယူအဆနှင့်အညီ oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူ, NMDA နေဖြင့်တစ်ဦးဟာ ventral subiculum ထံမှ dialysate အတွက် extracellular အချိုမှုအက်ဆစ်ထဲမှာတိုး, နှင့် ventral subiculum အတွက် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် receptors ၏ဆွနှင့်အတူ concomitantly ဖြစ်ပေါ် penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ အစီရင်ခံအထက်တွင်အဖြစ်အလှည့်ထဲမှာအချိုမှုအက်ဆစ်သည် ventral tegmental ဧရိယာ၌ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးသောအာရုံကြော efferent Project, မြှင့်လုပ်ဆောင်။ ဤအယန္တရားများအတွက် amygdala ၏ posteromedial နျူကလိယလည်းစစ်ဆင်ရေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာမသိနိုင်ပါဘူး။ ထို့အပြင်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများကဤအာရုံခံနောက်ဆုံးမှာများမှာလျှင် ventral subiculum နှင့် amygdala ၏ posteromedial နျူကလိယ၌ (1) oxytocinergic အာရုံကြောနောက်ဆုံးတွင်နှင့် receptors (2), နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase ်အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်ဒေသခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့လိုအပ်သောများမှာ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အားဖြင့် activated အချက်ပြစနစ်ကကိုဖေါ်ထုတ်ရန် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် (glutamatergic) synapses နှင့် (3) ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်။ ဤကိစ်စတှငျက oxytocin များ၏စွမ်းရည်ကို၎င်း caudal ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာနှင့် ventral subiculum နှင့် amygdala ၏ posteromedial နျူကလိယထဲတွင်ရှိနေဆဲမသိသောအာရုံခံ၏ dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ဖို့မှတ်သားစရာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပြသည် အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယ (Melis et al ။ , 1997) တွင် oxytocinergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-synthase သက်ဝင်စေဖို့ oxytocin များ၏စွမ်းရည်။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏တိုးလာထုတ်လုပ်မှု guanylate cyclase ကိုသက်ဝင်နှင့်သိသိ GMP တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ထိုအအာရုံခံ၏ activation မှဦးဆောင်နေစဉ်အတွင်းသို့သော်ဤ paraventricular နျူကလိယအတွင်းပေါ်ပေါက်မထားဘူး။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာဒါမနေချိန်တွင်အညီ, အ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း 8-bromo-သိသိ GMP, penile စိုက်ထူသွေးဆောင်မထားဘူး။ နောက်ထပ်ကတော့နိုက်ထရစ် oxidecyclic GMP စနစ်အထို့နောက် endogenous နှင့် / သို့မဟုတ် exogenous နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အားဖြင့် penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေ oxytocinergic အာရုံခံ၏ activation အတွက် paraventricular အဆင့်မှာပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ထံမှကွဲပြားခြားနားသောအချက်ပြလမ်းကြောင်း (Melis နှင့် Argiolas, 1995b; Melis et al, 1997 ။ ) (ပုံ ။ 1) ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာသိသိ GMP mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ activation နှင့်အထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုထံမှရရှိသော dialysate အတွက်ဖြစ်ပေါ်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine အတွက်တိုးလည်းအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှဟန် တစ်ဦးတပိုင်တနိုင် ovariectomized လက်ခံ (အီစထိုဂျင် + ချို့ယွင်းသောကုသ) ၏ရှေ့တော်၌ထားသောအခါအမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်ဖေါ်ပြခြင်းသို့မဟုတ် noncontact penile စိုက်ထူဖေါ်ပြခြင်းမရွေးချယ်ထားကြသည်။ သာကြိုးနှံစှာ, phosphodiesterase inhibitors အားဖြင့် caudal ventral tegmental ဧရိယာ (Sanna et သို့ငါအပ်သော်လည်းထိုအစမ်းသပ်အခြေအနေများအတွက်, noncontact penile စိုက်ထူဖေါ်ပြခြင်းအထီးကြွက်များတွင်, အပို-ဆယ်လူလာတစ်ခုတိုး dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုမျှော်မှန်းထားသည်အဖြစ်တွေ့ရှိရသည်နှင့်ဤတိုးထပ်မံတိုးပွါး အယ်လ်။ , 2009) ။
penile စိုက်ထူသွေးဆောင်ဖို့နဲ့ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံမျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်စေဖို့အတူတကွ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း dopamine agonists ၏အတူ ventral subiculum နှင့် amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယထဲတွင် ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်း oxytocin များ၏စွမ်းရည်, အချို့မှတ်ချက်ထိုက်တန်ပါတယ် ။ penile စိုက်ထူထိုကဲ့သို့သောသုတ်ရည်ထိကာလအတွင်း (ထဲမှာ copula penile စိုက်ထူပေါ်ပေါက်သည့်အခါ) သို့မဟုတ် noncontact penile စိုက်ထူစဉ်အတွင်းအဖြစ်ဇီဝကမ္မအခင်းအကျင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါပထမဦးစွာအထက်ပြန်ပြောပြသူတို့အားအလားတူယန္တရားများစစ်ဆင်ရေးဖြစ်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားစိုက်ထူလိင်အစွမ်းထက်အထီးကြွက်တစ်ဦးတပိုင်တနိုင်လက်ခံ၏ရှေ့မှောက်တွင်ထဲသို့သွင်းထားသည့်အခါဖြစ်ပေါ်ရသောမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ် oxytocin အားဖြင့်သွေးဆောင်သူများထံမှချွတ်စွပ်အရွယ်အစား pheromones-mediated penile စိုက်ထူများမှာ (ovariectomized အီစထိုဂျင် + ချို့ယွင်းသောရစေတယ်) အမျိုးသမီးကြွက်နှင့်လိင်တစ်ဦးအညွှန်းကိန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ် arousal (Sachs, 1997, 2007) ။ အမှန်စင်စစ်ဤရလဒ်များကိုဤဒေသများအတွက် oxytocin ကိုသရုပ်ပြကြဘူးပေမယ့်ဇီဝကမ္မအခင်းအကျင်းတွင်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ် penile စိုက်ထူအတွက်အခန်းကဏ္ဍ, သူတို့ကဤသူသည်ဦးနှောက်ဒေသများ oxytocin ပေးထားရှိရာသူတို့အားပိုင်ဗဟိုတိုးမြှင့်ဖို့ပြုမူကြောင်းအကြံပြုအစောပိုင်းတွေ့ရှိချက်မှနောက်ထပ်အစွမ်းသတ္တိကို add လိုလားတဲ့ erectile မူးယစ်ဆေးဝါးများပြီးနောက်မြင်ကြအလိုအလျောက် penile စိုက်ထူဖြစ်စဉ်များ, မသာပေမယ့်လည်းအထီး (နှင့်အမျိုးသမီး) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတိုးတက်စေရန် (မြို့သား Argiolas နှင့် Melis, 2004 နှင့်ကိုးကားကြည့်ပါ) ။ ထို့ကြောင့် apomorphine တစ်လိုလားသူ erectile ထိုးနဲ့ကုသအထီးကြွက်များ၏ hippocampus အတွက် oxytocin အာရုံစူးစိုက်မှုတိုး, တစ်ဦးဂန္ dopamine agonist (Melis et al ။ , 1990) နှင့်ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) -Orn8-vasotocin, အရာလုပ်ကွက် oxytocin receptors, copulatory အပြုအမူ impairing ထဲမှာမသာအလွန်အမင်းထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ် (Argiolas et al ။ , 1987a) ဒါပေမယ့်လည်းအထီး copulatory အပြုအမူအပေါ် apomorphine ၏ facilitatory အကျိုးသက်ရောက်မှု (Argiolas et al ။ , 1987b) လိင်ကအစွမ်းထက်အထီးကြွက်အတွက် copula penile စိုက်ထူအတွက်ထားတဲ့ကာလအတွင်း ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) -Orn8-vasotocin လိင်အစွမ်းထက်အထီးကြွက်ထဲမှာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricles သို့ nanogram ပမာဏ၌ပေးသောအခါ, ဒါပေမယ့်မ PVN သို့ noncontact စိုက်ထူလျှော့ချတွင်လည်းအလွန်အစွမ်းထက်ဖြစ်ပါတယ် (Melis et al ။ , 1999a) ။
ဒုတိယအချက်မှာ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ, ရေနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သဘာဝအလျောက်အားဖြည့်လှုံ့ဆော်မှု, (; ပညာရှိများနှင့် Rompre, 1988; Everitt, 1989 Fibiger နှင့် Phillips က, 1990) ၏စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်ကြိုးဂုဏ်သတ္တိများအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍ။ အထူးသဖြင့်အဲဒီအာရုံခံကနေဖြန့်ချိ dopamine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အမှု၌ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ရှာဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရောက်ရှိရန်, ရည်မှန်းချက်ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေသို့သဘာဝအလှုံ့ဆော်မှုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်များ၏ transposition ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်ထင်နေသည် (Goto နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) ။ တစ်ဦးတပိုင်တနိုင် ovariectomized အီစထိုဂျင် + ချို့ယွင်းသော-ရစေတယ်လက်ခံအမျိုးသမီးကြွက်မှထိတွေ့မှုစဉ်အတွင်းလိင်အစွမ်းထက်အထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens ထံမှ dialysate အတွက်အ extracellular dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုတိုး, နှင့်အထီးကြွက်ဟာလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူ copulate ခွင့်ပြုခဲ့အခါထိုကဲ့သို့သောတိုးကိုတောင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့ (Pfaus နှင့် Everitt, 1995) ။
တတိယအချက်ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုတစ်ဦးအာရုံကြော circuit ကိုကို (ventral subiculum နှင့် / သို့မဟုတ် amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယတဆင့်) ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် ventral tegmental ဧရိယာနှင့်အတူ paraventricular နျူကလိယကိုဆက်သွယ်သောအယူအဆနှင့်နျူကလိယ accumbens ကိုထောကျပံ့များနှင့်ဒီကနေအမည်မသိမှတဆင့် ဒီလမ်းအတွက်ပြောင်းလဲပစ် penile စိုက်ထူဖြန်ဖြေဟာကျောရိုးနှင့် ventral tegmental ဧရိယာမှထုတ်လုပ်တဲ့ oxytocinergic အာရုံခံ၏ထုတ်လုပ်တဲ့ oxytocinergic အာရုံခံများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ paraventricular နျူကလိယက, ventral subiculum နှင့် amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယမှနောက်ကျောကိုထပ်လမ်းကြောင်းသည် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ (ပုံ။ 4) ၏လှုပ်ရှားမှု။ ဤရှုပ်ထွေးအာရုံကြော circuit ကိုပုသူတွေရဲ့စားသောက် (erectile-ejaculatory) နှင့်ဇီဝကမ္မအခင်းအကျင်းအတွက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ anticipatory (စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်အကြိုး) ရှုထောင့်များ၏ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများများ၏ပေါင်းစည်းမှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။ သုတ်ရည်ထိခွင့်ပြုခဲ့သည့်အခါတစ်ဦးတပိုင်တနိုင်လက်ခံအမျိုးသမီး noncontact စိုက်ထူပေါ်ပေါက်သည့်အခါကြွက်, နှင့် ပို. ပင်ထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens (Pfaus နှင့် Everitt, 1995) နှင့်လိင်အစွမ်းထက်အထီးကြွက်များ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက်အမှန်စင်စစ်အပို-ဆယ်လူလာ dopamine တိုး, ဥပမာ copula penile စိုက်ထူအတွက် (Melis et al ။ , 2003) ပေါ်ပေါက်သည့်အခါ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများ, noncontact စိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်း ventral subiculum နှင့် amygdala အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ endogenous oxytocin ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်သောသော်လည်းယင်းမှပံ့ပိုးစဉ်ထို့ကြောင့်ကဒီမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့အာရုံကြောဆားကစ်ယူဆပြီးတော့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်နိုင်ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သူတွေရဲ့စားသောက်ရှုထောင့်, တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများရှင်းပြများအတွက်အာရုံကြောအလွှာပေး mesolimbic dopaminergic စနစ် (; Pfaus နှင့် Everitt, 1990 Everitt, 1995) ကိုသက်ဝင်စေနိုင်သည်။ ဤကိစ်စတှငျက ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်း oxytocin အားဖြင့် activated အဆိုပါ mesolimbic dopaminergic စနစ်ကထိုကဲ့သို့သော opiates, cannabinoids, စိတ်ကြွဆေး, ကိုကင်းနှင့်အရက်ကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် activated တူညီကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် (Tanda et al ။ , 1997) နှင့် ကြောင်း oxytocin (Kovacs et al, 1998 ။ Cui et al, 2001 ။ ) ကိုကင်း, မော်ဖင်းအကိုက်, အရက်နှင့် cannabinoids မှသည်းခံစိတ်နှင့်မှီခိုကိုလျှော့ချနိုင်စွမ်းရှာတွေ့ခဲ့သည်။ နိဂုံးချုပ်မှာ, oxytocin အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာမသာဖြန့်ချိခဲ့ပုံ, ဒါပေမယ့်လည်း ventral subiculum နှင့် amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယ၌, အစာစားချင်စိတ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအရာ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ, activate လုပ်နိုင်ပါတယ် ။ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏တက်ကြွစွာ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာအချိုမှုအက်ဆစ် neurotransmission ၏ activation မှတဆင့် mesolimbic dopaminergic အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက် oxytocinergic receptors မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ, သွယ်ဝိုက်ဖြစ်နိုင်သည်။
နျူကလီးယပ်အတွက်ဖြန့်ချိ Dopamine shell ကို oxytocinergic ၏ activation မှတဆင့်အလှည့်အတွက် (ထိုကျောရိုးမှထုတ်လုပ်တဲ့ oxytocinergic အာရုံခံ၏ activation မှတဆင့်) penile စိုက်ထူဖြစ်စေဖြစ်စေတဲ့အတွက် paraventricular နျူကလိယထဲတွင် incerto-hypothalamic dopaminergic အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆုလာဘ် (modulates accumbens အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာသည် ventral subiculum ဒါမှမဟုတ် amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယ) ကိုထုတ်လုပ်တဲ့အာရုံခံ။ (။ ။ Melis et al, 2007, 2003 Succu et al, 2007), က dopamine လည်း penile စိုက်ထူဇီဝကမ္မအခင်းအကျင်း (ဥပမာ noncontact စိုက်ထူခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိ) တွင်ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါအခွံနှင့် paraventricular နျူကလိယအတွက် accumbens နျူကလီးယပ်အတွက်ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက အလယ်ပိုင်း oxytocinergic အာရုံခံအဆိုပါ mesolimbic နှင့် incerto-hypothalamic dopaminergic သည့်စနစ်အကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်ဖြန်ဖြေအာရုံကြောဆားကစ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြောင်းဖွယ်ရှိ။ ဤရွေ့ကားအာရုံကြောဆားကစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့် (ဥပမာ penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိ) တွင်, ဒါပေမယ့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ထဲမှာမသာအခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။
သင်္ဘောသဖန်း။4။
ဤအခနျးနှင့်ယခင်အစီရင်ခံစာများ၏ရလဒ်များကိုနေဖြင့်အကြံပြုအဖြစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, ကြိုးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်လွှမ်းမိုး oxytocin ပတျသကျတဲ့မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့အာရုံကြော circuitry ၏သိထားကိုယ်စားပြုမှု။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယထဲမှနှင့် dopamine နဲ့အချိုမှုအက်ဆစ်အားဖြင့် (သို့သော်အခြား neurotransmitters နှင့် / သို့မဟုတ် neuropeptides အားဖြင့်) ဥပမာအဘို့အ activated အခါကျောရိုးမှထုတ်လုပ်တဲ့ Oxytocinergic အာရုံခံသည်ကျောရိုးမှထုတ်လုပ်တဲ့ oxytocinergic အာရုံခံသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယအတွက် Dopamine နှင့်အချိုမှုအက်ဆစ် (သို့သော်လည်း neurotransmitters နှင့် neuropeptides) လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆုလာဘ်ပြောင်းလဲပစ်, ဖြင့်နျူကလိယ accumbens မှထုတ်လုပ်တဲ့ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံသက်ဝင်ခြင်း, ventral tegmental ဧရိယာမှထုတ်လုပ်တဲ့ oxytocinergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ဖြန့်ချိ Dopamine (NAS) ကပရောဂျက်သောသူတို့အပါအဝင် incerto-hypothalamic dopaminergic အာရုံခံ (Dahlstrom နှင့် Fuxe ၏ A13-A14 အုပ်စုများအတွက်မူရင်း) oxytocinergic အာရုံခံအပေါ် impingingamongothers ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသောအလှည့်နေဆဲမသိသောအာရုံကြောလမ်းကြောင်း, အတွင်းမြှင့်လုပ်ဆောင် အဆိုပါကျောရိုး, penile စိုက်ထူရန်ဦးဆောင်။ ဤသည် circuitry ကိုလည်း ventral မှဖြစ်နိုင်သည်ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် glutamatergic efferent မှတဆင့်ကိုလည်း paraventricular နျူကလိယတစ်ဦးထံမှ oxytocinergic innervation ခံယူသော caudal ventral tegmental ဧရိယာသို့, ဒါပေမယ့်လည်း ventral subiculum နှင့် amygdala ထဲမှာမသာထိုးသွင်း oxytocin က activated စေခြင်းငှါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့် penile စိုက်ထူနှစ်ဦးစလုံး၏မော်ဂျူမှဦးဆောင် tegmental ဧရိယာ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အထက်ပါ circuitry လည်းအပို-ဆယ်လူလာ dopamine နဲ့ pheromones-mediated noncontact စိုက်ထူခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိစဉ်အတွင်း paraventricular နျူကလိယ (နှင့် medial preoptic ဧရိယာထဲမှာ) (သင့်လျော်သောညွှန်းဆိုသည့်ကြည့်ရှုဘို့အတွက်အချိုမှုအက်ဆစ်တိုးကတည်းက, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့် pheromones အားဖြင့် activated စေခြင်းငှါ ကိုးကားစာရင်း) ။
ဒီအလုပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း AA ကိုနှင့် MRM ဖို့တက္ကသိုလ်နှင့်သုတေသနအီတလီန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်တစ်ဦးထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံခဲ့သည် Acknowledgments
Andersson, Ke, 2001 ။ penile စိုက်ထူ၏ဆေးဝါးဗေဒ။ Pharmacol ။ ဗျာ 53, 417-450 ။ Argiolas, အေ, 1994 ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် penile စိုက်ထူများ၏ဗဟိုဖျန်ဖြေသည်။ Neuropharmacology 33, 1339-1344 ။ Argiolas, အေ, 1999 ။ Neuropeptides နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 23, 1127-1142 ။ Argiolas, အေ, Gessa, GL, 1991 ။ oxytocin ဗဟိုလုပ်ငန်းဆောင်တာ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 15, 217-231 ။ Argiolas, အေ, Melis, MR, 1995 ။ penile စိုက်ထူ၏ Neuromodulation: neurotransmitters နှင့် neuropeptides ၏အခန်းကဏ္ဍကိုခြုံငုံသုံးသပ်။ prog ။ Neurobiol ။ 47, 235-255 ။ Argiolas, အေ, Melis, MR, 2004 ။ oxytocin နှင့်အထီးနို့တိုက်သတ္တဝါများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် paraventricular နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 83, 309-317 ။ Argiolas, အေ, Melis, MR, 2005 ။ penile စိုက်ထူဗဟိုထိန်းချုပ်မှု: အ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍ။ prog ။ Neurobiol ။ 76, 1-21 ။ Argiolas, အေ, collu, အမ်, Gessa, GL, Melis, MR, Serra, G. အ, 1988 ။ အဆိုပါ oxytocin ရန်ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) -Orn8-vasotocin ကြွက်များတွင်အထီး copulatory အပြုအမူ antagonizes ။ အီးယူအာရ်။ J. Pharmacol ။ 149, 389-392 ။ Argiolas, အေ, Collu, အမ်, D'Aquila, P. , Gessa, GL, Melis, MR, Serra, G. အ, 1989 ။ အထီး copulatory အပြုအမူ၏ Apomorphine ဆွဟာ oxytocin ရန်ဃ (CH2) 5Tyr ကြွက်များတွင် (ငါ့ကို) -Orn8-vasotocin နေဖြင့်တားဆီးနေသည်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 33, 81-83 ။ Argiolas, အေ, Melis, MR, Gessa, GL, 1985 ။ Intraventricular oxytocin ကြွက်များတွင်ဟနေခြင်းနှင့် penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ အီးယူအာရ်။ J. Pharmacol ။ 117, 395-396 ။ Argiolas, အေ, Melis, MR, Gessa, GL, 1986 ။ oxytocin: အထီးကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်းတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်သွေးဆောင်။ အီးယူအာရ်။ J. Pharmacol ။ 130, 265-272 ။ Argiolas, အေ, Melis, MR, Mauri, အေ, Gessa, GL, 1987a ။ Paraventricular နျူကလိယကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြွက်များတွင် apomorphine နှင့် oxytocin အားဖြင့်သော်လည်းမ ACTH အားဖြင့်သွေးဆောင်ဟနေခြင်းနှင့် penile စိုက်ထူကာကွယ်ပေးသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 421, 349-352 ။ Argiolas, အေ, Melis, MR, Vargiu, အယ်လ်, Mauri, အေ, Gessa, GL, 1987b ။ ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) -Orn8-vasotocin တစ်အစွမ်းထက် oxytocin ရန်, oxytocin နှင့် apomorphine အသုံးပြုပုံသော်လည်းမ ACTH 1-24 အားဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်း antagonizes ။ အီးယူအာရ်။ J. Pharmacol ။ 134, 221-224 ။ Argiolas, အေ, Melis, MR, Stancampiano, R. , Gessa, GL, 1990 ။ _-Conotoxin အထီးကြွက်များတွင် apomorphine နှင့် oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်းကာကွယ်ပေးသည်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 37, 253-257 ။ Arletti, R. , Bertolini, အေ, 1985 ။ oxytocin အမျိုးသမီးကြွက်များတွင် lordosis အပြုအမူကိုလှုံ့ဆျော။ Neuropeptides 6, 247-255 ။ Arletti, R. , Bazzani, C တို့, Castelli, အမ်, Bertolini, အေ, 1985 ။ oxytocin ကြွက်များတွင်အထီး copulatory စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 19, 14-20 ။ Arletti, R. , Benelli, အေ, Bertolini, အေ, 1990 ။ အိုမင်းအထီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ oxytocin ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွနေသည်။ အီးယူအာရ်။ J. Pharmacol ။ 179, 377-382 ။ Arletti, R. , Calzà, အယ်လ်, Giardino, အယ်လ်, Benelli, အေ, Cavazzutti, အီး, Bertolini, အေ, 1997 ။ လိင်ခွန်အားမရှိခြင်း oxytocin တစ်လျှော့ချထုတ်လုပ်မှုနှင့် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် opioid peptides တစ်ခုတိုးလာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ neuroscience ။ လက်တ။ 233, 65-68 ။ Bancila, အမ်, Giuliano, အက်ဖ်, Rampin, O. , Mailly, P. , Brisorgueil, MJ, Clas, အေ, Verge, ဃ, 2002 ။ ယင်းနျူကလိယ၏ putative serotoninergic အာရုံခံဖို့ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယကနေတိုက်ရိုက်စီမံကိနျးအတှကျထောကျအထားကြွက်များတွင်စိုက်ထူ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက် paragigantocellularis ။ အီးယူအာရ်။ J. neuroscience ။ 16, 1240-1249 ။ ဘားနက်, AL, Lowenstein, CJ, Bredt, DS, Chang, TSK, Snyder, SH, 1992 ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်: penile စိုက်ထူတဲ့ဇီဝကမ္မဖျန်ဖြေ။ သိပ္ပံ 257, 401-403 ။ Baskerville, TA, ဒေါက်ဂလပ်, AJ, 2008 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် dopamine နဲ့ oxytocin အကြားအပြန်အလှန်။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 170, 277-289 ။ Baskerville, TA, Allard, ဂျေ, Wayman, C တို့, ဒေါက်ဂလပ်, AJ, 2009 ။ penile စိုက်ထူအတွက် Dopamine-oxytocin အပြန်အလှန်။ အီးယူအာရ်။ J. neuroscience ။ 30, 2151-2164 ။ Benelli, အေ, Bertolini, အေ, Poggioli, R. , Cavazzutti, အီး, Calzà, အယ်လ်, Giardino, အယ်လ်, Arletti, R. , 1995 ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကြွက်၏အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ အီးယူအာရ်။ J. Pharmacol ။ 294, 505-510 ။ ဘာ, ဂျေ, Rampin, O. , Sachs, bd, Giuliano, အက်ဖ်, 1999 ။ ကြွက်များတွင်စိုက်ထူစဉ်အတွင်း Intracavernous ဖိအား: telemetric မှတ်တမ်းတင်အပေါ်အခြေခံပြီးသမာဓိချဉ်းကပ်။ နံနက်။ J. Physiol ။ 276, R441-R449 ။ Bitner, RS, Nikkel, AL, Otte, အက်စ်, Martino, ခ, Barlow, Eh, Bhatia, P. , Stewart က, AO, Brioni, JD, နှစ်ထပ်, မဂ္ဂါဝပ်, Moreland, RB, 2006 ။ ကြွက် paraventricular hypothalamic နျူကလိယထဲမှာအချက်ပြ Dopamine D4 အဲဒီ receptor: ပရိုတိန်း kinase phosphorylation activated ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇသော induction နှင့် mitogen ပါဝင်သောသဘာဝအလျောက်နားချင်းဆက်မှီ၏သက်သေသာဓက။ Neuropharmacology 50, 521-531 ။ Brioni, JD, Moreland, RB, Cowart, အမ်, Hsieh က, GC, Stewart က, AO, Hedlund, P. , Donnelly-Roberts သည်, DL, Nakane, အမ်, Lynch 3rd ။ , ဂျေ, Kolasa, တီ, Polakowski , JS, Osinski MA, နားမှာ, K. , Andersson, Ke, Sullivan က, JP, 2004 ။ ABT-4 အားဖြင့် dopamine D724 receptors ၏ activation ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 101, 6758-6763 ။ Buijs, RM, 1978 ။ Intra- နှင့်ကြွက်များတွင်အပို-hypothalamic vasopressin နဲ့ oxytocin လမ်းကြောင်း။ cell တစ်ရှူး Res ။ 192, 423-435 ။ Buijs, RM, Geffard, အမ်, ရေကူးကန်, CW, Hoorneman, EMD, 1984 ။ အဆိုပါ supraoptic နှင့် paraventricular နျူကလိယ၏ dopaminergic innervation ။ တစ်ဦးကအလင်းနှင့်အီလက်ထရွန်အဏုလေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 323, 65-72 ။ ဝဲလ်, JD, ရမ်, AJ, Pedersen,, CA, 1986 ။ oxytocin အီစထိုဂျင်-ကုသအမျိုးသမီးကြွက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Neuropeptides 7, 175-189 ။ ကင်မရွန်, JL, Pomerantz, SM, Layden, LM, Amico, ဂျာ 1992 ။ apomorphine နှင့် D2 အဲဒီ receptor agonist အားဖြင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမျောက်များ၏သွေးရည်ကြည်အတွက် oxytocin ပြင်းအား၏ Dopaminergic ဆွ။ J. Clin ။ Endocrinol ။ Metab ။ 75, 855-860 ။ Canteras, NS, Simerly, RB, Swanson, LW, 1995 ။ အဆိုပါ amygdala ၏ medial နျူကလိယကနေစီမံကိန်းကို organization: ကြွက်တစ် PHAL လေ့လာမှု။ J. comp ။ Neurol ။ 360, 213-245 ။ Carmichael, MS, Humbert, R. , Dixen, ဂျေ, Palmisano, G. အ, Greeleaf, ဒဗလျူ, Davidson, JM, 1987 ။ plasma oxytocin လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်တိုးပွားစေပါသည်။ J. Clin ။ Endocrinol ။ Metab ။ 64, 27-31 ။ Carter က, CS, 1992 ။ oxytocin နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 16, 131-144 ။ Carter က, CS, Lederhendler, II, ပက်ထရစ်ခ, 1997 ။ ဆက်နွယ်မှု၏ Interactive မှ Neurobiology, သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ, vol ၏ရာဇဝင်။ 807 ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ, New York က။ Castelli, အမတ်, Piras, AP, Melis, တီ, Succu, အက်စ်, Sanna, အက်ဖ်, Melis, MR, collu, အက်စ်, Ennas, MG, Diaz, G. အ, Mackie, K. , Argiolas, အေ , 2007 ။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယနှင့် penile စိုက်ထူ၏ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုအတွက် Cannabinoid CB1 receptors: immunocytochemistry, autoradiography နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ။ neuroscience 147, 197-206 ။ Chen က KK, Chang, LS, 2003 ။ အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် penile စိုက်ထူအပေါ် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်အဲဒီ receptor agonists ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြွက်များတွင် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယသို့။ J. Urol ။ 62, 575-580 ။ Chen က KK, ချမ်း, JYH, Chang, LS, ချန်, MT, Chang, SHH, 1992 ။ ကြွက်များတွင် hippocampal ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ activation အောက်ပါ penile စိုက်ထူ၏ထုတ်ယူ။ neuroscience ။ လက်တ။ 141, 218-222 ။ Chen က KK, ချမ်း, JYH, Chang, LS, 1999 ။ ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူ၏ဗဟိုစည်းမျဉ်းထဲမှာ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယမှာ Dopaminergic neurotransmission ။ J. Urol ။ 162, 237-242 ။ Collins, GT ကို, Truccone, အေ, ဟာဂျီ-Abdi, အက်ဖ်, Newman က, AH, Grundt, P. , ဆန်, KC, ချင်းယောက်ျားတို့, SM, လောဘ, BM, Enguehard-Gueiffer, C တို့, Gueiffer, အေ, Chen က , ဂျေ, ဝမ်, အက်စ်, Katz, JL, ယူဆပါတယ်, DK, Sunahara, RK, ဝုဒ်, JH, 2009 ။ dopamineD2 ကဲ့သို့ agonists ၏ Pro ကို-erectile သက်ရောက်မှုကြွက်များနှင့်ကြွက်များအတွင်း D3 အဲဒီ receptor ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ J. Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 329, 210-217 ။ Coolen, LM, Allard, ဂျေ, Truitt, WA, McKenna, Ke, 2004 ။ သုတ်ရည်လွှတ်ဗဟိုစည်းမျဉ်း။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 83, 203-215 ။ Cui, အက်စ်အက်စ်, Bowen တို့, RC, Gu, GB ကို, Hannesson, ကယ်, ယု, PH သည်, Zhang က, X တို့မှာ, 2001 ။ လီသီယမ်အားဖြင့် cannabinoid ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး: oxytocinergic အာရုံခံ activation ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J. neuroscience ။ 21, 9867-9876 ။ Dahlstrom, အေ, Fuxe, K. , 1964 ။ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် monoamine ပါဝင်သောအာရုံခံ၏တည်ရှိမှုအဘို့သက်သေသာဓက။ I. brainstem အာရုံခံ၏ဆဲလ်အသေကောင်အတွက် monoamines ၏ဆန္ဒပြ။ Acta Physiol ။ Scand ။ 62 (ပျော့ပျောင်း။ 232), 1-54 ။ Depoortère, R. , Bardin, အယ်လ်, Rodrigues, အမ်, Abrial, အီး, Aliaga, အမ်, Newman က-Tancredi, အေ, 2009 ။ strain နှင့် dopamine D2 ၏ပံ့ပိုးမှုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဒါပေမယ့်မရ D2 နှင့် D3 receptors: ကြွက်များတွင် dopamine D4 တူသောအဲဒီ receptor agonists အားဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်း။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 20, 303-311 ။ မိုးခုံး, G. အ, Heinrich, အမ်, Buchel, C တို့, Braus, DF, Herpertz, SC, 2007 ။ oxytocin မသက်ဆိုင် valence ၏စိတ်ခံစားမှုမျက်နှာများမှ amygdala တုံ့ပြန်မှု attenuates ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 62, 11871190 ။ Dominguez, ဂျေ, Riolo, ဖက်စပ်, Xu, Z. , Hull, ME, 2001 ။ သုတ်ရည်ထိနှင့် medial preoptic dopamine လွှတ်ရာ medial amygdala တို့ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ J. neuroscience ။ 21, 349-355 ။ Donaldson, ZR, လူငယ်, LJ, 2009 ။ oxytocin, vasopressin နှင့်လူမှုရေး၏ neurogenetics ။ သိပ္ပံ 322, 900-904 ။ Eaton, RG, Markowski, VF, Lumley, LA က, Thompson က, JT, မောရှေ, ဂျေ, Hull, EM, 1991 ။ အဆိုပါ paraventricular နျူကလိယအတွက် D2 receptors အထီးကြွက်များတွင်လိင်အင်္ဂါတုံ့ပြန်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိထိန်းညှိ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 39, 177-181 ။ Ebner, K. , Bosch ရဲ့, OJ, Krömer, SA, Singewald, N. , နျူမန်, ID ကို, 2005 ။ ကြွက်အလယ်ပိုင်း amygdala အတွက် oxytocin ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်စိတ်ဖိစီးမှု-ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းအပြုအမူနှင့် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်များလွှတ်ပေးရန် modulates ။ Neuropsychopharmacology 30, 223-230 ။ Enguehard-Gueiffier, C တို့, Hübner, အိပ်ချ်, အယ်လ် Hakmaoui, အေ, Allouchi, အိပ်ချ်, Gmeiner, P. , Argiolas, အေ, Melis, MR, Gueiffier, အေ, 2006 ။2- [(4-Phenylpiperazin-1-yl) methyl] imidazo (di) အဖြစ်ရွေးချယ် D4-ligands azines ။ 2- အားဖြင့် penile စိုက်ထူ၏ induction [4- (2-methoxyphenyl) piperazin-1-ylmethyl] imidazo [1,2-တစ်ဦး] pyridine (PIP3EA), တစ်ဦးအစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် D4 agonist ။ J. Med ။ Chem ။ 49, 3938-3947 ။ Everitt, BJ, 1990 ။ လိင်လှုံ့ဆျောမှု: အစာစားချင်စိတ်များနှင့် copulatory တုံ့ပြန်မှုအထီးကြွက်အခြေခံသည့်ယန္တယားတစ်ခုအာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 14, 217-232 ။ Fibiger, HC, Phillips က, AG က, 1988 ။ Mesocorticolimbic dopamine စနစ်နှင့်ဆုလာဘ်။ အမ်း။ N. Y. Acad ။ သိပ္ပံ။ 5, 206-215 ။ ပြင်သစ်, SJ, Totterdell, အက်စ်, 2003 ။ တစ်ဦးချင်းနျူကလိယ accumbens-projection အာရုံခံ basolateral amygdala နှင့်ကြွက်များတွင် ventral subicular afferents နှစ်ဦးစလုံးလက်ခံရရှိသည်။ neuroscience 119, 19-31 ။ 954 MR Melis, အေ Argiolas / အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် Biobehavioral 35 (2011) 939-955 Freund-Mercier, MJ, ရစ်ချက်, P. , 1981 Reviews ။ ကြွက်များတွင်နို့ထွတ်တုံ့ပြန်မှုအပေါ် oxytocin ၏ intraventricular ထိုး၏ Excitatory ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ လက်တ။ 23, 193-198 ။ Freund-Mercier, MJ, ရစ်ချက်, P. , 1984 ။ ကြွက်များတွင် suckling စဉ်အတွင်း oxytocin နေဖြင့်အာရုံခံ oxytocin ၏ facilitatory ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ J. Physiol ။ (Lond ။ ) 352, 447-466 ။ Freund-Mercier, MJ, Stoeckel, ME, 1995 ။ oxytocin အာရုံခံအပေါ် Somatodendritic autoreceptors ။ ခုနှစ်တွင်: Ivell, R. , Russell ဂျေအေ (Eds ။ ), oxytocin, ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးဆိုင်ရာဆေးပညာနှင့်သုတေသနအတွက်ချဉ်းကပ်။ Adv ။ Exp ။ Med ။ Biol ။ , 365 ။ Plenum စာနယ်ဇင်း, New York နဲ့လန်ဒန်, စစ။ 185-194 ။ Freund-Mercier, MJ, Stoeckel, ME, Palacios, JM, Pazos, JM, ရစ်ချက်, PH သည်, port, အေ, 1987 ။ Pharmacological ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် autoradiography နေဖြင့်လေ့လာ Wistar ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ 3H oxytocin binding က်ဘ်ဆိုက်များ၏ခန္ဓာဗေဒဖြန့်ဖြူး။ neuroscience 20, 599-614 ။ Giuliano, အက်ဖ်, Rampin, O. , 2000 ။ penile စိုက်ထူဗဟိုထိန်းချုပ်မှု။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 24, 517-533 ။ Giuliano, အက်ဖ်, Allard, ဂျေ, 2001 ။ Dopamine နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို။ int ။ J. သင်ျခြို Res ။ 13 (ပျော့ပျောင်း။ 3), 18-28 ။ Giuliano, အက်ဖ်, Rampin, O. , 2004 ။ စိုက်ထူ၏အာရုံကြောထိန်းချုပ်မှု။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 83, 189-201 ။ Giuliano, အက်ဖ်, ဘာ, ဂျေ, McKenna, Ke, Longueville, အက်ဖ်, Rampin, O. , 2001 ။ ထုံဆေးကြွက်များတွင် oxytocin ၏ကျောရိုး proerectile အကျိုးသက်ရောက်မှု။ နံနက်ဂျေ Physiol ။ စည်းမျဉ်းများ။ integer ။ comp ။ Physiol ။ 280, R1870-R1877 ။ goto, Y. , တော်ကကျေးဇူး, AA ကို, 2005 ။ နျူကလိယ၏ limbic နှင့် cortical drive ကို၏ Dopaminergic မော်ဂျူရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် accumbens ။ နတ်။ neuroscience ။ 8, 805-812 ။ Hawthorn, ဂျေ, အန်း, VT, Jenkins, JS, 1985 ။ ကြွက်ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုးထဲမှာ vasopressin နဲ့ oxytocin အပေါ် hypothalamic paraventricular, supraoptic နှင့် suprachiasmatic အရေးပါအတွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res ။ 346, 51-57 ။ Heier, RF, Dolak, LA က, Duncan ကဖြစ်မှု, Hyslop, DK, Lipton, MF, မာတင်, LJ, Mauragis MA, Piercey, MF, Nichols, အဲန်အက်ဖ်, Schreur, PJ, Smith ကမီဂါဝပ်, မွန်း, မဂ္ဂါဝပ်, 1997 ။ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ဇီဝ (R) -5,6-dihydro-N လှုပ်ရှားမှုများ, N-dimethyl-4H-imidazo [4,5,1-ij] quinolin-5-Amin) နှင့်၎င်း၏ metabolites ။ J. Med ။ Chem ။ 40, 639-646 ။ Hsieh, GC, Hollingsworth, PR, Martino, B. , Chang, R. , Terranova, MA, O'Neill, AB, Lynch, JJ, Moreland, RB, Donnelly-Roberts, DL, Kolasa, T. , Mikusa, JP , McVey, JM, နားမှာ, KC, Sullivan က, JP, Brioni, JD, 2004 ။ သတိကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူထိန်းညှိဗဟိုယန္တရားများ: apomorphine ၏ proerectile အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. dopaminergic စနစ်များကို။ J. Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 308, 330-338 ။ Huang က, PL, Dawson, TM, Bredt, DS, Snyder, SH, Fishman, MC, 1993 ။ အဆိုပါအာရုံခံနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ဗီဇ၏နှောင့်အယှက်ကိုပစ်မှတ်ထား။ cell 75, 1273-1286 ။ Huber, ဃ, Veinante, P. , ကျိုးပဲ့လျက်, R. , 2005 ။ Vasopressin နှင့် oxytocin ဗဟို amygdala အတွက်ကွဲပြားအာရုံခံလူဦးရေ excite ။ သိပ္ပံ 308, 245-248 ။ Hull, EM, Warner, RK, Bazzett, တီဂျေ, Eaton, RC, Thompson က, JT, 1989 ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ၌ D2 / D1 အချိုးအထီးကြွက်၏သုတ်ရည်ထိသက်ရောက်သည်။ J. Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 251, 422-427 ။ Hull, EM, ဒူ, ဂျေ, Lorraine, DS, Matuszewich, အယ်လ်, 1995 ။ အဆိုပါ medial preoptic ဧရိယာ၌ extra-ဆယ်လူလာ dopamine: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်သုတ်ရည်ထိဟော်မုန်းကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ J. neuroscience ။ 15, 7465-7471 ။ Hull, EM, Meisel, RL, Sachs, bd, 2002 ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ ခုနှစ်တွင်: Pfaff, DW, အာနိုး, AP, Etgen, Am, Fahrbach, SE, Rubin က, RT ကို (Eds ။ ), ဟော်မုန်း, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်, စစ။ 3-137 ။ Hurlemann, R. , Patin, အေ, Onur, oa, Cohen ကို, MX, Baumgartner, တီ, Metzler, အက်စ်, Dziobek, ဗြဲ, Gallinat, ဂျေ, Wagner, အမ်, Maier, ဒဗလျူ, Kendrick, KM, 2010 ။ oxytocin လူသားတွေအတွက် amygdala-မှီခို, လူမှုရေးအရအားဖြည့်လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာနာပိုကောင်းစေပါတယ်။ J. neuroscience ။ 30, 4999-5007 ။ Ivell, R. , Russell, ဂျာ 1995 ။ oxytocin: ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးဆိုင်ရာဆေးပညာနှင့်သုတေသနအတွက်ချဉ်းကပ်။ စမ်းသပ်ဆေးပညာနှင့်ဇီဝဗေဒ, vol တိုးတက်လာ။ 395 ။ Plenum စာနယ်ဇင်း, New York က။ ကယ်လီ, AE, Domesick, vB, 1982 ။ ကြွက်များတွင်နျူကလိယ accumbens ဖို့ hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးကနေစီမံကိန်း၏ဖြန့်ဖြူး: တစ်ခု anterograde- နှင့် retrograde-horseradish peroxidase လေ့လာမှု။ neuroscience 7, 2321-2335 ။ Kimura, Y. , Naitou, Y. , Wanibuchi, အက်ဖ်, ယာမာဂူချီ, တီ, 2008 ။ 5-HT (2C) အဲဒီ receptor activation ကြွက်များတွင် apomorphine, oxytocin နှင့် melanotan-II ၏ proerectile သက်ရောက်မှုအပေါ်တစ်ဦးဘုံယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။ အီးယူအာရ်။ J. Pharmacol ။ 589, 157-162 ။ Kondo, Y. , Sachs, bd, Sakuma, Y. , 1998 ။ estrous အမျိုးသမီးထံမှဝေးလံခေါင်သီလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked ကြွက် penile စိုက်ထူအတွက် medial amygdala ၏အရေးပါမှု။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 91, 215-222 ။ Kovacs, GL, Sarnyai, Z. , Szabo, G. အ, 1998 ။ oxytocin နှင့်စွဲ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Psychoneuroendocrinology 23, 945-962 ။ Lee က HJ, Macbeth, AH, Pagani, JH, Scott လူငယ် 3rd, ဒဗလျူ, 2009 ။ oxytocin: အသက်တာ၏အကြီးစည်းရုံးရေးမှူး။ prog ။ Neurobiol ။ 88, 127-151 ။ Lindvall, O. , Bjorklund, အေ, Skagerberg, G. အ, 1984 ။ ကြွက် di- နှင့် telencephalon အတွက် dopamine terminal ကိုစနစ်များရွေးချယ် istochemical သရုပ်ပြ: hypothalamic neurosecretory အရေးပါ၏ dopaminergic innervation အသစ်သက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res ။ 306, 19-30 ။ လျူ, YC, Salamone, JD, Sachs, bd, 1997 ။ အထီးကြွက်များတွင် hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်ချို့ယွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 111, 1361-1367 ။ Löber, အက်စ်, Tschammer, N. , Hübner, အိပ်ချ်, Melis, MR, Argiolas, အေ, Gmeiner, P. , 2009 ။ တစ်ဝတ္ထု bioisostere အဖြစ် azulene မူဘောင်: penile စိုက်ထူ inducing အစွမ်းထက် dopamine D4 အဲဒီ receptor ligands ၏ဒီဇိုင်းကို။ Chem ။ Med ။ Chem ။ 4, 325-328 ။ McCleskey, EW, Fox က, AP, Feldman, DH, Cruz, LJ, Olivera, BM, Tsien, RW, Yoshikami, ဃ, 1987 ။ _-Conotoxin: တိုက်ရိုက်နှင့်ဇွဲအာရုံခံအတွက်ကယ်လစီယမ်လိုင်းများ၏တိကျသောအမျိုးအစားများပိတ်ဆို့ထားခြင်းမဟုတ်ကြွက်သား။ Prot ။ နတ်။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 84, 4327-4331 ။ McKenna, Ke, 2000 ။ penile စိုက်ထူ၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းနှင့်စပ်လျဉ်းတချို့ကအဆိုပြုချက်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 24, 535-540 ။ Marson, အယ်လ်, McKenna, Ke, 1992 ။ ကျောရိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု၏တားစီးဆငျးအတွက် 5-hydroxytryptamine တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ Exp ။ ဦးနှောက် Res ။ 88, 313-318 ။ Marson, အယ်လ်, McKenna, Ke, 1996 ။ အဆိုပါ ischiocavernosus နှင့် bulbospongiosus ကြွက်သားထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက် CNS ဆဲလ်အုပ်စုများ: pseudorabies ဗိုင်းရပ်စ်သုံးပြီး transneuronal သဲလွန်စလေ့လာမှု။ J. comp ။ Neurol ။ 374, 161-179 ။ Meisel, RL, Sachs, bd, 1994 ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်။ ခုနှစ်တွင်: Knobil, အီး, နီးလ်, ဂျေ (Eds ။ ), မျိုးပွားခြင်း၏ဇီဝကမ္မဗေဒ, vol ။ 2, ဒုတိယစာစောင်။ ကျီးစာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်, စစ။ 3-96 ။ Melin, P. , Kihlstrom, je, 1963 ။ အထီးယုန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် oxytocin ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 73, 433-435 ။ Melis, MR, Argiolas, အေ, 1995a ။ Dopamine နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 19, 19-38 ။ Melis, MR, Argiolas, အေ, 1995b ။ အထီးကြွက်များ၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းထိုးသွင်းသည့်အခါနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်အလှူရှင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်းသွေးဆောင်။ အီးယူအာရ်။ J. Pharmacol ။ 294, 1-9 ။ Melis, MR, Argiolas, အေ, 2003 ။ ဗဟို oxytocinergic neurotransmission: psycogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကုထုံးများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးပစ်မှတ်။ Curr ။ မူးယစ်ဆေး 4, 55-66 ပစ်မှတ်ထား။ Melis, MR, Argiolas, အေ, Gessa, GL, 1986 ။ oxytocin-သွေးဆောင်ဟနေခြင်းနှင့် penile စိုက်ထူ: ဦးနှောက်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက် site ကို။ ဦးနှောက် Res ။ 398, 259-265 ။ Melis, MR, Argiolas, အေ, Gessa, GL, 1987 ။ Apomorphine-သွေးဆောင်ဟနေခြင်းနှင့် penile စိုက်ထူ: ဦးနှောက်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက် site ကို။ ဦးနှောက် Res ။ 415, 98-104 ။ Melis, MR, Argiolas, အေ, Gessa, GL, 1989a ။ Apomorphine ကြွက်များတွင်ပလာစမာ oxytocin အဆင့်ဆင့်တိုးပွားစေပါသည်။ neuroscience ။ လက်တ။ 98, 351-355 ။ Melis, MR, Argiolas, အေ, Gessa, GL, 1989b ။ apomorphine ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် oxytocin လွှတ်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်း induces ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား။ အီးယူအာရ်။ J. Phamacol ။ 164, 565-570 ။ Melis, MR, Argiolas, အေ, Stancampiano, R. , Gessa, GL, 1990 ။ ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အထီးကြွက်များ၏သွေးရည်ကြည်အတွက် oxytocin ပြင်းအားအပေါ် apomorphine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အီးယူအာရ်။ J. Pharmacol ။ 182, 101-107 ။ Melis, MR, Mauri, အေ, Argiolas, အေ, 1994a ။ Apomorphine- နှင့်နဂိုအတိုင်းနှင့် castrated အထီးကြွက်များတွင် oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်း: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ steroids ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Neuroendocrinology 59, 349-354 ။ Melis, MR, Stancampiano, R. , Argiolas, အေ, 1994b ။ paraventricular NMDA ထိုးခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်း oxytocin ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 48, 203-207 ။ Melis, MR, Stancampiano, R. , Argiolas, အေ, 1994c ။ ဦးနှောက်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက် site ကို: apomorphine- ၏ Ng-Nitro-ဌမိုင်နိုအက်စစ် methyl Ester နှင့် oxytocin-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်းအားဖြင့်ကာကွယ်တားဆီးရေး။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 48, 799-804 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Argiolas, အေ, 1996 ။ penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်းနှင့်အတူဆက်စပ်: Dopamine agonists အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်။ အီးယူအာရ်။ J. neuroscience ။ 8, 2056-2063 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Iannucci, U. , Argiolas, အေ, 1997 ။ oxytocin အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုတိုးပွါး: penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်းနှင့်အတူဆက်စပ်မှု။ Reg ။ Peptides 69, 105-112 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Mauri, အေ, Argiolas, အေ, 1998 ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှု Non-အဆက်အသွယ် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းအထီးကြွက်များ၏ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယတိုးမြှင်ဖြစ်ပါတယ်။ အီးယူအာရ်။ J. neuroscience ။ 10, 1968-1974 ။ Melis, MR, Spano, MS, Succu, အက်စ်, Argiolas, အေ, 1999a ။ အဆိုပါ oxytocin ရန်ဃ (CH2) 5Tyr (ငါ့ကို) 2-Orn8-vasotocin အထီးကြွက်များတွင် Non-အဆက်အသွယ် penile စိုက်ထူလျော့နည်းစေသည်။ neuroscience ။ လက်တ။ 265, 171-174 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Spano, MS, Argiolas, အေ, 1999b ။ အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းမော်ဖင်းအကိုက် Non-အဆက်အသွယ်စိုက်ထူကာကွယ်ပေးသည်နှင့်သုတ်ရည်ထိချို့ယွင်း: နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ အီးယူအာရ်။ J. neuroscience ။ 11, 1857-1864 ။ Melis, MR, Spano, MS, Succu, အက်စ်, Argiolas, အေ, 2000 ။ noncontact penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်အထီးကြွက်များတွင် paraventricular နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်, dopamine နှင့် oxytocin အဲဒီ receptor ရန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 114, 849-857 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Mascia, MS, Cortis, အယ်လ်, Argiolas, အေ, 2003 ။ extra-ဆယ်လူလာ dopamine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းအထီးကြွက်များ၏ paraventricular နျူကလိယအတွင်းတိုးပွားစေပါသည်။ အီးယူအာရ်။ J. neuroscience ။ 17, 1266-1272 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Mascia, MS, Argiolas, အေ, 2004a ။ အထီးကြွက်များ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် cannabinoid CB1receptors ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ neuroscience ။ လက်တ။ 359, 17-20 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Mascia, MS, Cortis, အယ်လ်, Argiolas, အေ, 2004b ။ extra-ဆယ်လူလာ excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းအထီးကြွက်များ၏ paraventricular နျူကလိယတိုးပွါး: erectile function ကိုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍ ofNMDAreceptors ။ အီးယူအာရ်။ J. neuroscience ။ 19, 2569-2575 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Mascia, MS, Argiolas, အေ, 2005 ။ အထီးကြွက်များ၏ paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ PD-168,077 တစ်ဦးရွေးချယ် dopamine D4 အဲဒီ receptor agonist, penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ neuroscience ။ လက်တ။ 379, 59-62 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Mascia, MS, Sanna, အက်ဖ်, Melis, တီ, Succu, အက်စ်, Castelli, အမတ်, Argiolas, အေ, 2006a ။ အထီးကြွက်များတွင် SR 141716A-သွေးဆောင် penile စိုက်ထူ: paraventricular အချိုမှုအက်ဆစ်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်။ Neuropharmacology 50, 219-228 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Sanna, အက်ဖ်, Mascia, MS, Melis, တီ, Enguehard-Gueiffier, C တို့, Hubner, အိပ်ချ်, Gmenier, P. , Gueiffier, အေ, Argiolas, အေ, 2006b ။ PIP3EA နှင့် PD168077 နှစ်ခုရွေးချယ် dopamine D4 အဲဒီ receptor agonists, အထီးကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူသွေးဆောင်: ဦးနှောက်အတွက်လုပ်ဆောင်ချက် site နှင့်ယန္တရား။ အီးယူအာရ်။ J. neuroscience ။ 24, 2021-2030 ။ Melis, MR, Melis, တီ, Cocco, C တို့, Succu, အက်စ်, Sanna, အက်ဖ်, Pillolla, G. အ, Boi, အေ, ကူးတို့, GL, Argiolas, အေ, 2007 ။ oxytocin penile စိုက်ထူ induces နှင့်နျူကလိယထဲမှာတိုးအပို-ဆယ်လူလာ dopamine MR accumbens အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်း Melis, အေ Argiolas / အာရုံကြောသိပ္ပံနှင့် Biobehavioral 35 (2011) 939-955 955 နှင့်အထီးကြွက်များ၏ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ Reviews ။ အီးယူအာရ်။ J. neuroscience ။ 26, 1026-1035 ။ Melis, MR, Sanna, အက်ဖ်, Succu, အက်စ်, Zarone, P. , Boi, အေ, Argiolas, အေ, 2009a ။ အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ anticipatory နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်အတွက် oxytocin ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ခုနှစ်တွင်: Jastrow, အိပ်ချ်, Feuerbach, ဃ (Eds ။ ), oxytocin သုတေသနလက်စွဲစာအုပ်: Synthesis, သိုလှောင်မှုနှင့်ဖြန့်ချိ, လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဆေးဝါးပုံစံများ။ nova ထုတ်ဝေ Inc မှ, နယူးယောက်, အမေရိကန်, စစ။ 109-125 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Sanna, အက်ဖ်, Boi, အေ, Argiolas, အေ, 2009b ။ oxytocin အဆိုပါ ventral subiculum သို့ထိုးသွင်းခြင်းသို့မဟုတ် amygdala ၏ posteromedial cortical နျူကလိယ penile စိုက်ထူ induces နှင့်အထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine တိုးပွားစေပါသည်။ အီးယူအာရ်။ J. neuroscience ။ 30, 1349-1357 ။ Melis, MR, Succu, အက်စ်, Cocco, C တို့, Caboni, အီး, Sanna, အက်ဖ်, Boi, အေ, ကူးတို့, GL, Argiolas, အေ, 2010 ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်အချိုမှုအက်ဆစ်: အ ventral subiculum သို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ oxytocin penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ Neuropharmacology 58, 1153-1160 ။ Moreland, RB, Nakane, အမ်, Donnelly-Roberts သည်, DL, Miller က ln, Chang, R. , Uchic, ME, Terranova MA, Gubbins, EJ, Helfrich, RJ, Namovic, MT, el-Kouhen ၏, မာစတာ, ဖြစ်မှု, Brioni, JD, 2004 ။ Galpha (qo2) မှတဆင့်ကယ်လစီယမ် flux မှ coupled receptor တည်ငြိမ်ဆဲလ်လိုင်းများ -like လူ့ dopamine: D (5) ၏နှိုင်းယှဉ်ဆေးဝါးဗေဒ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Pharmacol ။ 68, 761-772 ။ Moose, အက်ဖ်, Freund-Mercier, MJ, Guerne, Y. , Guerne, JM, Stoeckel, ME, ရစ်ချက်, P. , 1984 ။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လွှတ်ပေးရေးအပေါ် oxytocin ၏တိကျသော facilitatory အကျိုးသက်ရောက်မှု: စသည်တို့အတွက် magnocellular အရေးပါနေဖြင့် oxytocin နှင့် vasopressin ၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ J. Endocrinol ။ 102, 63-72 ။ မာဖီ, MR, Seckl, JR, Burton, အက်စ်, Checkley, SA, Lightman, SL, 1987 ။ အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း oxytocin နှင့် vasopressin Secret အတွင်းအပြောင်းအလဲများ။ J. Clin ။ Endocrinol ။ Metab ။ 65, 738-741 ။ Nishimori, K. , လူငယ်, LJ, Guo, ဆိုးကျိုး, ဝမ်, Z. , Insel, TR, Matzuk, MM, 1996 ။ oxytocin သူနာပြုများအတွက်လိုအပ်သော်လည်း parturition သို့မဟုတ်မျိုးပွားမှုအပြုအမူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမပေးပါ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 93, 11699-11704 ။ Patel က, အက်စ်, ဖရီးမနျး, အက်စ်, ချပ်မန်း, KL, Emms, အက်ဖ်, ဖလက်ချာ, AE, Knowles, အမ်, Marwood, R. , Mccallister, G. အ, Myers, ဂျေ, Curtis, ဂျေ, Kulagowski, JJ, Leeson, PD, Ridgill, အမ်, ဂရေဟမ်, အမ်, Matheson, အက်စ်, Rathbone, ဃ, Watt, AP, Bristow, LJ, Rupniak, မိုင်, Baskin, အီး, Lynch, JJ, Ragan, CI , 1997 ။ L ကို 745,870, အ dopamine D4 အဲဒီ receptor အဘို့အမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူတစ်ဦးရွေးချယ်ရန်၏ဇီဝဗေဒပရိုဖိုင်း။ J. Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 283, 636-647 ။ Pedersen,, CA, ဝဲလ်, JD, Jirikowski, gf, Insel, TR, 1992 ။ မိခင်အတွက် oxytocin, လိင်, နှင့်လူမှုအပြုအမူ, သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ, vol ၏ရာဇဝင်။ 652 ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ, New York က။ ရော့, P. , Kalisch, R. , အဆိုတော်, တီ, Dolan, RJ, 2008 ။ oxytocin conditional မျက်နှာများနှင့် amygdala လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ် attenuates ။ J. neuroscience ။ 28, 6607-6615 ။ Pfaus, JG, Everitt, BJ, 1995 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ psychopharmacology ။ ခုနှစ်တွင်: Knobil, FE, Kupfer, ဒီဂျေ (Eds ။ ), Psychopharmacology: တိုးတက်မှု၏စတုတ္ထမျိုးဆက်။ ကျီးစာနယ်ဇင်း, နယူးယောက်, စစ။ 742-758 ။ Rajfer, ဂျေ, Aronson, WJ, ဘုရှ်, PA, Dorey, FJ, Ignarro, LJ, 1992 ။ nonadrenergic, noncholinergic neurotransmission တုံ့ပြန်အတွက် Corpus cavernosum ၏အပန်းဖြေတစ်ဖျန်ဖြေအဖြစ်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်။ N. Engl ။ J. Med ။ 326, 90-94 ။ Roeling, TAP, ဗန် ERP, AMM, Meelis, ဒဗလျူ, Kruk, MR, Veening, JG, 1991 ။ NMDA ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုများကြွက်များ၏ hypothalamic paraventricular နျူကလိယသို့ထိုးသွင်း။ ဦးနှောက် Res ။ 550, 220-224 ။ Sachs, bd, 1997 ။ စိုက်ထူ estrous အမျိုးသမီးထံမှလေကြောင်းချီရနံ့များကအထီးကြွက်များတွင် evoked ။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 62, 921-924 ။ Sachs, bd, 2000 ။ Contextual erectile function ကို, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ခွဲခြားရန်ချဉ်းကပ်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 24, 541-560 ။ Sachs, bd, 2007 ။ အထီးလိင်စိတ်နိုးထတစ် Contextual ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 51, 569-578 ။ Sanchez, အက်ဖ်, Alonso, JR, Arevalo, R. , Blanco, အီး, Aijon, ဂျေ, Vazquez, R. , 1994 ။ ကြွက်များ၏ hypothalamic magnocellular neurosecretory အရေးပါအတွက် vasopressin နဲ့ oxytocin နှင့်အတူ NADPH-diaphorase ၏အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်။ cell တစ်ရှူး Res ။ 276, 31-34 ။ Sanna, အက်ဖ်, Succu, အက်စ်, Boi, အေ, Melis, MR, Argiolas, အေ, 2009 ။ Phosphodiesterase type ကို5inhibitors အထီးကြွက်များတွင် Non-အဆက်အသွယ်စိုက်ထူလွယ်ကူချောမွေ့: လုပ်ဆောင်ချက်၏ဦးနှောက်နှင့်ယန္တရားအတွက်လုပ်ဆောင်ချက် site ကို။ J. လိင်။ Med ။ 6, 2680-2689 ။ Saphier, ဃ, Feldman, အက်စ်, 1987 ။ paraventricular နျူကလိယတွင် neuron အပေါ် septal နှင့် hippocampal လှုံ့ဆော်မှုများ၏သက်ရောက်မှုများ။ neuroscience 20, 749-755 ။ Sato-ဆူဇူကီး, ဗြဲ, Kita, ဗြဲ, Oguri, အမ်, Arita, အိပ်ချ်, 1998 ။ ကြွက်၏ paraventricular နျူကလိယ၏လျှပ်စစ်နှင့်ဓာတုဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် Stereotyped ဟနေခြင်းတုံ့ပြန်မှု။ J. Neurophysiol ။ 80, 2765-2775 ။ Schuman, EM, Madison, DV, 1994 ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့် Synaptic function ကို။ အမ်း။ ဗျာ neuroscience ။ 17, 153-183 ။ Snyder, SH, 1992 ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်: ပထမဦးဆုံး neurotransmitters ၏သစ်တစ်ခုအတန်းထဲတွင်? သိပ္ပံ 254, 494-496 ။ Sofroniew, သင်္ဘော MV, 1983 ။ အဆိုပါနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုးထဲမှာ Vasopressin နှင့် oxytocin ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 6, 467-472 ။ Sokoloff, P. , Schwartz, JC, 1995 ။ novel dopamine နောက်ပိုင်းတွင်ဝက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု receptors ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol ။ သိပ္ပံ။ 16, 270-275 ။ Southam, အီး, Garthwaite, ဂျေ, 1993 ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်-သိသိ GMP အချက်ပြလမ်းကြောင်း။ Neuropharmacology 32, 1267-1277 ။ Stancampiano, R. , Melis, MR, Argiolas, အေ, 1994 ။ အထီးကြွက်များတွင် 5-HT1c agonists အားဖြင့်သွေးဆောင် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဟနေခြင်း: dopaminergic နှင့် oxytocinergic ဂီယာနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမျိုး။ အီးယူအာရ်။ J. Pharmacol ။ 261, 149-155 ။ Succu, အက်စ်, Mascia, MS, Sanna, အက်ဖ်, Melis, တီ, Argiolas, အေ, Melis, MR, 2006 ။ အဆိုပါ cannabinoid CB1 အဲဒီ receptor ရန် SR 141716A အထီးကြွက်များ၏ paraventricular နျူကလိယထဲမှာအပို-ဆယ်လူလာအချိုမှုအက်ဆစ်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 169, 274-281 ။ Succu, အက်စ်, Sanna, အက်ဖ်, Melis, တီ, Boi, အေ, Argiolas, အေ, Melis, MR, 2007 ။ အလယ်ပိုင်း oxytocin ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု: အထီးကြွက်များ၏ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် dopamine receptors ၏ stimulation နျူကလီးယပ်အတွက် penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်တိုးအပို-ဆယ်လူလာ dopamine accumbens ဖြစ်ပေါ်သည်။ Neuropharmacology 52, 1034-1043 ။ Succu, အက်စ်, Sanna, အက်ဖ်, Cocco, C တို့, Melis, တီ, Boi, အေ, ကူးတို့, GL, Argiolas, အေ, Melis, MR, 2008 ။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်သိသိ GMP: အထီးကြွက်များ၏ ventral tegmental ဧရိယာသို့ထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာ oxytocin penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်သည်။ အီးယူအာရ်။ J. neuroscience ။ 28, 813-821 ။ Tanda, G. အ, Pontieri, FE, Di Chiara, G. အ, 1997 ။ Cannabinoids နှင့်ဘုံ mu1 opioid အဲဒီ receptor ယန္တရားအားဖြင့် mesolimbic dopamine ဂီယာ၏ဘိန်းဖြူ activation ။ သိပ္ပံ 276, 2048-2050 ။ တန်, Y. , Rampin, O. , Cala, အေ, Facchinetti, P. , Giuliano, အက်ဖ်, 1998 ။ Oxytocinergic နှင့်အထီးကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူထိန်းချုပ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း lumbosacral အရေးပါ၏ serotoninergic innervation ။ neuroscience 82, 241-254 ။ Theodosis, ၎င်းကို, 1985 ။ အဆိုပါ supraoptic အရေးပါအတွက်အာရုံခံ oxytocin အပေါ် oxytocin-immunoreactive ဆိပ်ကမ်း synapses ။ သဘာဝတရား (လန်ဒန်) 313, 682-684 ။ Tindall, JS, 1974 ။ oxytocin များလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းလှုံ့ဆော်မှု။ ခုနှစ်တွင်: Geiger, SR, Knobil, အီး, Sawyer, WH, Greef, R. , Astwood, eb (Eds ။ ), ဇီဝကမ္မဗေဒ၏လက်စွဲစာအုပ်။ ဂိုဏ်း။ 7, ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်, vol ။ IV ။ အမေရိကန်ဇီဝကမ္မဗေဒလူ့အဖွဲ့အစည်း, ဝါရှင်တန်ဒီစီ, စစ။ 257-267 ။ တောရက်စ်, G. အလီ, အက်စ်, Rivier, C တို့, 1993 ။ neuropeptides အတူကြွက် hypothalamic နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase နှင့် colocalization ၏ Ontogeny ။ Mol ။ cell ။ neuroscience ။ 4, 155-163 ။ Uhl-Bronner, အက်စ်, Waltisperger, အီး, Martinez-Lorenzana, G. အ, အခြေအနေ, LM, Freund-Mercier, MJ, 2005 ။ forebrain နှင့်ကြွက်များ၏ကျောရိုးအတွက် binding က်ဘ်ဆိုက်များ oxytocin ၏လိင် dimorphic စကားရပ်။ neuroscience 135, 147-154 ။ Vaccari, C တို့, Lolait, SJ, Ostrowski, NL, 1998 ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ vasopressin V1b နှင့် oxytocin အဲဒီ receptor တမန် ribonucleic အက်ဆစ်နှိုင်းယှဉ်ဖြန့်ဖြူး။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 139, 5015-5033 ။ ဗန် Den Pol, အေ, 1991 ။ hypothalamic presynaptic axon အတွက်အချိုမှုများနှင့် aspartate immunoreactivity ။ J. neuroscience ။ 11, 2087-2101 ။ Veronneau-Longueville, အက်ဖ်, Rampin, O. , Freund-Mercier, MJ, တန်, Y. , Cala, အေ, Marson, အယ်လ်, McKenna, Ke, Stoeckel, ME, Benoit, G. အ, Giuliano, အက်ဖ် , 1999 ။ ကြွက်များတွင် penile စိုက်ထူထိန်းချုပ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအရေးပါ၏ Oxytocinergic innervation ။ neuroscience 93, 1437-1447 ။ ဗင်းဆင့်, SR, Kimura, အိပ်ချ်, 1992 ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase ၏ Histochemical မြေပုံ။ neuroscience 46, 755-784 ။ Wagner, CK, Clemens, LG 1993 ။ lumbar ကျောရိုးတစ်လိင် dimorphic မော်တာနျူကလိယဖို့ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယကနေ Neurophysin ပါဝင်သောလမ်းကြောင်း။ J. comp ။ Neurol ။ 336, 106-116 ။ Winslow, JT, Insel, TR, 1991 ။ အထီးရှဉ့မျောက်များ၏အားလုံးအတွက်လူမှုအဆင့်အတန်းကိုဗဟို oxytocin အုပ်ချုပ်မှုဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ J. neuroscience ။ 11, 2032-2038 ။ ပညာရှိ RA, Rompre, P.-P. , 1989 ။ ဦးနှောက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်။ အမ်း။ ဗျာ Psychol ။ 40, 191-225 ။ Witt, DM, Insel, TR, 1994 ။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဟာ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယထဲမှာအာရုံခံ oxytocin အတွက်က c-fos တူသောပရိုတိန်းမြှင့်လုပ်ဆောင်။ J. Neuroendocrinol ။ 6, 13-18 ။ Witter, အမတ်, 2006 ။ ကြွက်များ၏ subiculum ၏ connections: စပ်လျဉ်းမြေမျက်နှာသွင်ပြင် columnar ရန်နှင့် laminar အဖွဲ့အစည်းက။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 174, 251-264 ။ Woodruff, Gn, Foster, AC, Gill, R. , Kemp, ဂျာ Wong, Eh, Iversen, ll, 1987 ။ N-methyl-D-aspartate များအတွက် MK-801 နှင့် receptors အကြားအပြန်အလှန်: အလုပ်လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်များ။ Neuropharmacology 26, 903-909 ။ Yamashita, အိပ်ချ်, Shigeru, O. , Inenaga, K. , Kasai, အမ်, Uesugi, အက်စ်, Kannan, အိပ်ချ်, Kaneko, တီ, 1987 ။ oxytocin အများစုစသည်တို့အတွက်ကြွက် supraoptic နျူကလိယအတွက် putative oxytocin အာရုံခံ excites ။ ဦးနှောက် Res ။ 416, 364-368 ။ ကြီးတွေ, DP, Hendrick, SE, Prendergast MA, 1992 ။ ယင်းနျူကလိယ၏တွေ့ရှိရပါသည် paragigantocellularis: အထီးကြွက်များတွင်မိတ်လိုက်အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 596, 73-79 ။ လူငယ်တို့, WS, Shepard, အီး, Amico, ဂျေ, Hennighausen, အယ်လ်, LaMarca, ME, McKinney, C တို့, Ginns, EI, 1996 ။ mouse ကို oxytocin အတွက်ချို့တဲ့နို့ထွတ်, ဒါပေမယ့်မရကလေးမွေးဖွားသို့မဟုတ် parturition ကာကွယ်ပေးသည်။ J. Neuroendocrinol ။ 8, 847-854 ။ Zahran, AR, Vachon, P. , Courtois, အက်ဖ်, Carrier, အက်စ်, 2000 ။ ထုံဆေးကြွက်များ၏ hypothalamic paraventricular နျူကလိယအတွက် excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ်အဲဒီ receptor agonists ၏ထိုးအောက်ပါ intracavernous penile ဖိအားတိုး။ J. Urol ။